(showing articles 1281 to 1300 of 1811)
04/12/14--08:23: _Selfie ....
04/13/14--13:50: _စစ်သားဆိုတာ ....
04/13/14--13:57: _ထိန်းသိမ်းသင့်ပေ ယဥ...
04/14/14--13:16: _Burma, Buddhism and...
04/14/14--13:23: _WWII RARE COLOR FIL...
04/14/14--13:28: _WWII BURMA CONDUIT ...
04/14/14--13:29: _WWII RARE COLOR FIL...
04/16/14--05:16: _ကရိုင်းမီးယား နှင့်...
04/16/14--20:47: _မင်းဇင်- သန်းစိုး (...
04/19/14--09:49: _ပြည်ပရောက် မြန်မာနု...
04/19/14--09:59: _Social Vulnerability
04/22/14--06:15: _အမျိူးအမည် မသိ ဝေဒနာ
04/22/14--06:40: _လွမ်းလောက်လို့လား ....
04/23/14--06:15: _၁၁ မီးကြားက အမှားတွေ
04/23/14--09:11: _နိုင်ငံတော် အရည်အသေ...
04/25/14--01:09: _ဒီလိုလူငယ်လေးတွေ အမ...
older | 1 | .... | 63 | 64 | (Page 65) | 66 | 67 | .... | 91 | newer
04/12/14--06:28: လေးစားပူဇော်ထိုက်သော ဆရာ
6 hrs· Yangon·
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်က ကျနော်နေခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းက ဆရာ/ဆရာမများကန်တော့ပွဲလုပ်ပါတယ်။ ကန်တော့ပွဲမှာ ကျနော်တို့ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ အင်မတန်လေးစားကြောက်ရွံ့ရတဲ့ ဆရာရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီဆရာဦးမြင့်မောင်ကို ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေက အင်မတန်ကြောက်ရပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ဆရာဦးမြင့်မောင်(သချီာ)နဲ့ (အခုစာရေးနေတဲ့ ကိုမင်းဇင် အဖေ) ဆရာဦးမြသန်း (အင်္ဂလိပ်စာ) တို့ (၂) ယောက်ကို ကျောင်းသားတွေက အကြောက်ဆုံး အလေးစားဆုံးပါ။
ဆရာဦးမြင့်မောင်က အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပါ။ သူဥပုသ်ယူတဲ့ ကာလများမှာတောင် တံတွေးမမျိုရလို့ အပြင်ထွက်ပြီး တံတွေးထွေးလိုက် စာသင်လိုက်နဲ့ ဘယ်တော့မှ စေတနာမလျော့ ၀တ္တရားမပျက်တဲ့ဆရာမျိုးပါ။ အရိုက်ကလဲ အင်မတန်ကြမ်းပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကျောင်းက ယောက်ကျားလေးကျောင်းဆိုတော့ အဲသလောက်မှ တန်ကာကျတဲ့ ကျောင်းမျိုးပေါ့။ ကျောင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်နေတာများ အဲဒီဆရာတွေ တွေ့သွားရင် အဆိပ်မျိုချလိုက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်လောက်အောင် ထက်တဲ့ဆရာတွေပါ။ မိဘတွေကလည်း အင်မတန်အားကိုးတဲ့ ဆရာမျိုးတွေပေါ့။
ခုချိန်မှာ ဆရာနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ဆရာက တတွတ်တွတ်ပြောဆို ရိုက်နှက် ကြိမ်းမောင်း ဆုံးမခဲ့တဲ့.
.. ဖောင်တိန်နဲ့ရေးရင် အဖုံးချွတ်တာနဲ့ ဖောင်တိန်ဖင်မှာ ပြန်စွပ်ထားစမ်း၊ ဖိနပ်လျှပ်တိုက်စီးတာလောက် ငါကြည့်မရတာမရှိဘူး၊ လမ်းလျှောက်ရင် အသံမမြည်စေနဲ့၊ပုဆိုးတစ်ကြိမ်ဝတ်ပြီးရင် မြဲပေ့စေ ပုဆိုးခဏခဏပြင်ဝတ်တဲ့ကောင်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့ကောင်၊
ရင်ကော့ပြီးလမ်းလျှောက်၊ ငါ့ရှေ့မှာ ခါးလာမကိုင်းနဲ့၊ ယောက်င်္ကျားလို လမ်းလျှောက်စမ်း၊ မသိရင်မသိဘူးပြော၊ ငါးပါးသီလမှာ ဘာက အရင်ဆုံးလာသတုန်း၊
စာသင်ခန်းထဲမှာ ခေါင်းမော့ထားစမ်း၊ .... စသည်ဖြင့် ဆရာပြောလေ့ရှိတဲ့စကားတွေကို ကြားယောင်မိပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ ပြည်တွင်းနေပုဂ္ဂိုလ်များကို နှိမ့်နှိမ့်ချချ ပြောတာေ၇းတာတွေ ဖတ်ရတိုင်း ဆရာ့ကို သတိရမိတယ်။ အားနာမိတယ်။ မျက်နှာပူမိတယ်။ ကိုယ့်မှာအပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်။
ကျနော့်ဆရာက ငါးပါးသီလလုံတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆရာပါ။
ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ တပည့်တွေ ကျွေးတဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းက ဟာလာ လုပ်မထားမှန်းသိသိနဲ့ မြိန်မြိန်ယှက်ယှက်စားခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆရာပါ။
ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ ဆရာမကြီးကို ဦးဆောင်ကန်တော့တတ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆရာပါ။
ကျောင်းမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ ဆရာကန်တော့ပွဲတိုင်းမှာ တပည့်တွေကို ယောက်င်္ကျားကောင်းပီသဖို့၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ချစ်ဖို့ အမြဲဆုံးမနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆရာပါ။
အမေ့ကိုတွေ့တာနဲ့ ”ဒေါက်တာ့သား.. ဆေးလိပ်သောက်နေတာတွေ့လို့ ကျနော်တော့ တွယ်ပစ်ခဲ့ပြီ” လို့ ပြောတတ်တာတွေကြောင့် ကျနော်တို့အမေတွေအားကိုးထိုက်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆရာပါ။
စာသင်ခန်းထဲဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်လောက်ပူပူ အိုက်အိုက် တိုက်ပုံအင်္ကျီင်္ ကြယ်သီးအစေ့တပ်ပြီး သင်တတ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဆရာပါ။
ဆရာတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ ပျော်ဝင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။
ဒီလိုနေထိုင်ပြောဆိုကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးကို ကျနော်ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ ကန်း နိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီလိုဆရာမျိုးတွေ သွန်သင်မှုအောက်က ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကျနော့်အဖို့ ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ စော်ကားနိုင်ပါ့မလဲ။ ဆရာက ဘာသာခြားမို့ ကျနော်က မုန်းရမတဲ့လား။ ဆရာက ဘာသာခြားမို့ ကျနော်က ရိုင်းရိုင်းစိုးင်းစိုးင်း ဆက်ဆံရမတဲ့လား။ ဆရာက ဘာသာခြားမို့ တစ်ဘ၀စာရှိနေတဲ့ ဆရာ့ကျေးဇူးကို မေ့လိုက်ရမတဲ့လား။ မဖြစ်နိုင်လိုက်တာဗျာ။
- - - လို့ မရှိတဲ့လူမျိုးအမည်တပ်ခေါ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးမယ့် ဘင်ဂါလီတွေကို ကျနော်လက်မခံတာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ ကျနော့် ကျေးဇူးရှင်ဆရာကို ကျနော်လေးစားချစ်ခင်တာ တစ်ခြားစီပါ။ ဘယ်လိုမှ ပတ်သက်လို့ မရပါဘူး။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတူတာက တူတာပါဘဲ။ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်ချင်းက တစ်ခြားစီပါ။
04/12/14--08:23: Selfie ....
မကြာသေးခင်က ပြောမနာဆိုမနာ..ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးလာတယ် “ ဟေ့ကောင်..ကိုယ့်ဓါတ်ပုံကိုယ်တင်တာ စိတ်ရောဂါတဲ့ကွ င့ါဆရာက ပြောနေတယ်…မင်းက psychology နဲ့ လည်းဘွဲ့ ရထားတာဆိုတော့..အဲဒါ ဟုတ်လား…ငါ မခံချင်လို့ ပြန်ငြင်းချင်လို့ …သီအိုရီလေး ဘာလေးပြောစမ်းပါ ” တဲ့။ ဒါနဲ့ …ဒါဟာ အမေရိကန် စိတ်ပညာအသင်း (American Psychological Association) က ထုတ်ပြန်တဲ့ ဆောင်းပါးမဟုတ်တဲ့အကြောင်း…အခြားသူတစ်ယောက်က ဖွထားတာသာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဖတ်မိတာကို ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်..။
တဆက်တည်း ပြောဖြစ်တာက…စံလွဲစိတ်ပညာ (Abnormal Psychology) မှာ စံလွဲ (abnormal) နဲ့ ပုံမှန် (normal) ခဲခြားနိုင်မှုဟာ ထင်သလောက် မရိုးစင်း မလွယ်ကူကြောင်း…ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စိတ်ပညာ (personality psychology) ကို လေ့လာဖို့ သင့်တဲ့အကြောင်း ...။
တကယ်က ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာဆိုတာ အင်မတန်ကျယ်ဝန်းလှသလောက် စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းလှလို့ လူတိုင်း သိသင့်သိအပ်တဲ့ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်ပါ..။ လူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှ ဒီဘာသာရပ်ကို လေ့လာထားရင် အကျိုးများတာပဲ..။ လေယဉ်မယ်ကလေးက အစ..ကျောင်းဆရာတွေအလယ်.. တရားဟော ဓမ္မကထိက အဆုံး ပေါ့..။ တကယ်က “ဘေသဇ္ဇဂုရ”ု အကောင်းဆုံးဆေးဆရာကြီးလို့ကင်ပွန်းတပ်ကြတဲ့ “ဗုဒ္ဓ” ဟာ ဒီ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်ကို တဖက်ခမ်းကပ် တတ်ကျွမ်းသူ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ကြီးလို့ ဆိုနိုင်တာပေါ့..။ ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုးပါးထဲက “အနုတ္တရောပုရိသ ဓမ္မသာရထိ သတ္တာဒေ၀ မနုဿာနံ” ဆိုတာ နာခံသူရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ကိုက်တဲ့ သွန်သင်ဟောပြောမှုကို ပြုလုပ်နိုင်တာကို ဆိုလိုတာပဲ လေ..။ ပဋ္ဋာစာရီ ကိုဟောတဲ့တရားကို ရှင်သာရိပုတ္တရာ အလောင်း သတို့ သားကို ဟော ခြင်းမရှိတာ…အင်္ဂုလိမာလ လိုလူကြမ်း ကိုလည်း သူနဲ့ သင့်လျော်မယ့် ဒေသနာ ပေးတာ စသဖြင့်…
အဘိဓမ္မာသဘောအရ စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်း ပုထုဇဉ်တိုင်းဟာ သက္ကာယဒိဋ္ဋိ ရှိသမို့ လုပ်သမျှ အမှုတိုင်းဟာ ဒီ ငါစွဲကနေ ထွက်လာတာချည်းကိုး..အ၀ိဇ္ဇာပစ္စယာ သင်္ခါရာ ပေါ့..။ အတ္တ ကြောင့် အတ္တနိယ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရား..။ စိတ်ပညာအရဆိုရင် မိဘမေတ္တာဆိုတာမျိုး တောင် ငါစွဲကင်းတာမဟုတ်ဘူး…။ ဥပမာ…ရင်သွေးကိုနို့ တိုက်တဲ့ အပြုအမူဆိုတာ နို့ ရည်တွေတင်းလာတာကို ပြေလျော့စေချင်လို့ ၊ ကလေးငယ်ကိုထွေးပိုက်ထားတော့ အနွေးဓါတ်ရချင်လို့ ၊ ကိုယ်ကြီးလာရင် ကိုယ့်ကို သူတို့ ကပြန်လည်စောင့်ရှောက်ဖို့ မျှော်လင့်လို့(social security) စသဖြင့် ငါစွဲ မကင်းတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပါတယ်လို့ ရှင်းပြကြတာပဲ..။ သစ္စကပရဗိုဇ် က ဗုဒ္ဓကို ပြန်ချေပတဲ့စကားလိုပေါ့…”သတ္တ၀ါတွေဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရပ်တည် အသက်ရှင်လှုပ်ရှားရသလို အတ္တ မရှိပဲ ထောက်ရာတည်ရာ ရနိုင်ပါ့မလား…အတ္တမရှိပဲ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား” ဆိုတာဟာ ဒီအစ်ရှူးပါပဲ..။ ဒီအဖြေ အမှန်စင်စစ် အတ္တရှိမရှိ ကို သိဖို့ ရာက မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ် သစ္စာလေးပါးကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မှ သိနိုင်မယ့်ကိစ္စပေါ့လေ..။ အတ္တဒိဋ္ဋိဆိုတာ လောကုတ္တရာ မဂ်တရား ဖိုလ်တရားနဲ့ မှပဲ ပယ်သတ်နိုင်တာကိုး..။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဆိုတာကလည်း အတ္တရဲ့ ပုံရိပ်လို့ ဆိုချင်မိတယ်။
အထက်က ဆိုခဲ့တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာက လောကီကြောင်းဆိုတော့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (သို့ ) အတ္တ ရဲ့ သဘောသဘာဝ တွေကို လောကီသိပ္ပံနည်းနဲ့ လေ့လာတယ်လို့ ပြောရင် သင့်မလားပဲ..။ ဒီနေရာမှာ သတိထားဖို့ ရာက ယဉ်ကျေးမှုဝတ်ရုံခြုံထားတဲ့ လူ ဆိုတာ အခြားသော သတ္တ၀ါတွေနဲ့ တူလည်းတူ ထူးထူးခြားခြားလည်း ကွဲနေတာတွေရှိတယ် ဆိုတာပဲ..။ ဥပမာ- ဗိုင်းရပ် တို့ ဘက်တီးရီးယားတို့ လို အရာတွေကို လေ့လာသလိုမျိုး လူကို တထစ်ချလေ့လာလို့ မရတာ..။ ဗိုင်းရပ် တစ်ကောင်ရဲ့ အပြုအမူကို သိရင် အခြားသော ဗိုင်းရပ်တွေရဲ့ အပြုအမူကို ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ခန့် မှန်းနိုင်ပေမယ့် မောင်ဖြူရဲ့ အကြောင်းသိရုံနဲ့ မောင်နီရဲ့ သဘောသဘာဝကို မခန့် မှန်းနိုင်ပေဘူး..။
တနည်းပြောရရင် လူ ကိုလေ့လာရင် တစ်ဦးချင်းအလိုက် ကွဲပြားခြားနားမှု (Individual Difference) ဟာ ထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်။ ဒါပေမယ့် လည်း ယေဘုယျပြုလို့ ရတဲ့အခြေအနေတွေ (Generalization) လည်းတချိန်တည်းမှာ ရှိနေပြန်ရော…ဥပမာ- ဆန်ကို စားသုံးတဲ့ အာရှသားတွေမှာ သွေးနီဥရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တာမျိုး..။ ဆိုတော့…လူကိုလေ့လာတဲ့ လူမှုရေးသိပ္ပံ (social sciences) တွေမှာ ယေဘုယျ ကောက်ချက်ဆွဲခြင်း နဲ့ တစ်ဦးချင်းကွဲပြားခြားနားမှု ဆိုတဲ့ ထိပ်တိုက်ဆန့် ကျင်ဘက်သဘောတရား ၂ခုကို ထဲ့သွင်းသုံးသပ်ရတာပဲ..။ ဒီအခါမှာ စာရင်းအင်းပညာ Statistics ဟာ မရှိမဖြစ်အရေးပါလာရော…။ ဥပမာ- “ဗမာတွေက ငပျင်းတွေ” ဆိုတဲ့စကား မျိုးထက် “ရာခိုင်နှုန်းမည်ရွေ့ မည်မျှရှိတဲ့ဗမာတွေက ပျင်းကြပြီးတော့ ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှကတော့ ၀ီရိယ ထက်သန်ကြတယ်” လို့ ပြောမှ မှန်တယ်ပေါ့….။ လောကကြီးမှာ Statistical Truth သည်သာ ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့..။
အထက်က စိတ်ပညာဆိုတာဟာလည်း ဒီစာရင်းအင်းအမှန်တရားပေါ်လုံးဝ အခြေပြုသုံးသပ်ရတဲ့ ဘာသာရပ်ပဲ..။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာမှာလည်း ချဉ်းကပ်ပုံနည်းနာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားကြတာပဲ..။ အချို့ က ခြင်းရာလက္ခဏာ trait နဲ့ ၊ အချို့ က type (type A,B,C စသဖြင့်) နဲ့အချို့ က အတွင်းစွဲအပြင်စွဲ (introvert vs. extrovert) နဲ့ ခွဲခြားပြီး ချဉ်းကပ်လေ့လာကြတာပဲ..။ အလွယ်ကူဆုံးကတော့ အတွင်းစွဲ၊ အပြင်စွဲချဉ်းကပ်နည်းပေါ့..။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းဟာ အတွင်းစွဲချည်းသီးသန့် မရှိသလို၊ အပြင်စွဲလုံးလုံးလည်းမရှိပါဘူး..။ ဘယ်အစွန်းဘက် ပိုရောက်သလဲပဲရှိတာ…continuum ပေါ့လေ..။ ဒီလိုပဲ traits တို့types တို့ နဲ့ ချဉ်းကပ်ရာမှာလည်း သီးသန့် တမျိုးတည်းဆိုတာမရှိ… လူဆိုတာ အရောင်မျိုးစုံနဲ့ ယက်ဖေါက်ထားတဲ့ သက်တန့် တစ်ခုပေါ့..။ ဘယ်အရောင်က ပိုထင်ရှားသလဲပဲ ကွာသွားတာ..။
အထက်က Selfie ကိုပြန်ကောက်ရရင်…ဒါဟာ… လူတွေက သူတို့ ရဲ့ အတ္တ (သို့ ) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပုံဖေါ်ဖို့ ကျိုးစားကြရာမှာ တနည်းတဖုံ အသုံးပြုတဲ့ ညွန်းဆိုခြင်းလက္ခဏာ (identification) နည်းနာတစ်ခုအဖြစ်မြင်လို့ ရတာပါပဲ။ တဖက်မှာလည်း ဒီ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား self-identity ဟာ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပဋ္ဋပိက္ခ (Conflict & Violence) ဘာသာရပ်ကို လေ့လာရင် မရှိမဖြစ် သိရမယ့် သဘောတရားတစ်ခု။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ပဋ္ဋိပက္ခမှန်သမျှဟာ နယ်ပယ် (territory) ကိုကျူးလွန်ခြင်းကနေစလေ့ရှိစမြဲကိုး..။ လူမှုရေးနယ်ပယ်၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် စသဖြင့်…။ ဒီနယ်ပယ်တွေဆိုတာ identity မရှိပဲ ရပ်တည်လို့ မှမရတာ..။ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒါပေါ့လေ..။
လေ့လာတွေ့ ရှိချက်တွေမှာဆိုရင်… ကြောက်စရာ လူသတ်သမား ဒုစရိုက်သမားတွေအများစုဟာ သူတို့ ရဲ အတ္တပုံရိပ် Self-identity ကို ကာကွယ်ဖို့ ကျိုးပမ်းရင်း ဒုစရိုက်သမားဖြစ်လာပြီး ဒီဘ၀ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်တာတဲ့…။ ဥပမာ- ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းအတွက်နဲ့သူ့ ရည်တည်မှုကို တိုက်ခိုက်တယ်ထင်တဲ့အခါ လူသတ်မိတာပဲ..။ နာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေကို လေ့လာတွေ့ ရှိချက်တစ်ခုမှာဆိုရင် အကျဉ်းသားတွေဟာ ယောကျာ်းမိန်းမ အားလုံးနီးပါး နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးထားတတ်ကြတာကို တွေ့ ရတယ်တဲ့..။ လောကငရဲတွင်းထဲမှာတောင် ကိုယ့်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပြီး ဖေါ်လိုတဲ့ လူသားရဲ့ အတ္တစွမ်းအင်ပေါ့လေ..။ အချို့ ဆို သေသာသွားရော လက်ထဲမှာ နှုတ်ခမ်းနီတောင့်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတာ တွေ့ ရသတဲ့လေ…။
တကယ်က …..ဒီလို အတ္တပုံရိပ် (self-identity) ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (personality) ဆိုတာ “မျက်နှာဖုံး” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ဂရိစကားလုံး “persona” က ဆင်းသက်လာတာပဲ..။ ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်အတ္တအတွက် မျက်နှာဖုံးမျိုးစုံရှိနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်မလားပဲ..။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ …ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါဘာသာရပ်မှာတော့ split personality လူတစ်ကိုယ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမျိုးစုံကွဲနေတာမျိုးရှိတယ်..။ ဒါကို ဇတ်လမ်းလုပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးလိုက်တော့ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ဆိုတဲ့ Robert Louis Stevenson ရဲ့ နာမည်ကျော်ဝတ္တုနဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာတာပါပဲ…။ မင်းသိင်္ခ ရေးတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဆိုတာ ဒါကို မြန်မာ မှုပြုထားတယ်ပြောကြတာပဲ...။ ဒါပေမယ့်လည်း အပြင်လောကမှာတော့ ဒီလို နေ့ တမျိုး ညတမျိုး လုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့ အဖြစ်မျိုးက ရှားပါတယ်…၀တ္ထုထဲမို့ သာ..။
နောက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါတစ်မျိုးက အထက်က Selfie နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နာဆစ်စပ်ရောဂါ Narcissus. ဒီရောဂါမှာ ဂရိဒဏ္တာရီလာ တဲ့ Narcissus လို့ ခေါ်တဲ့ နတ်သားနဲ့ ဆက်စပ် ပြီးခေါ်တာ…။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို…။ ဒီနတ်သားက ရုပ်အဆင်းအင်မတန်လှ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ကိုး။ အဲဒါ Echo ဆိုတဲ့ နတ်သမီးက သူ့ ကိုမြင်ပြီးစွဲလန်းသွားတော့ နောက်က တကောက်ကော်လိုက်လေသတဲ့..။ အဲဒါ အလှမာန်တက်တဲ့ နတ်သား နာဆစ်စပ်က သူ့ နောက်မလိုက်ဖို့ ပြောတော့ မင်းသမီးခမျာ ရင်ကွဲနာကျ၊ အထီးကျန်ဘ၀နဲ့ ပဲ အသက်ရှင်သန်နေရပြီး နောက်ဆုံး သူနဲ့ ပတ်သက်တာဆိုလို့အသံပဲ ကျန်တော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သတဲ့လေ..။ ဒါကို လက်စားချေတဲ့နတ်သား Nemesis က နာဆစ်စပ်ကို ရေကန်တစ်ခုဆီခေါ်သွားပြီး နာဆစ်စပ်ကို သူ့ ပုံရိပ် (Selfie) သူပြန် မြင်စေသတဲ့..။ အဲဒီအခါ…အလှမာန်တက်တဲ့နတ်သားခမျာ သူ့ ပုံရိပ် (selfie) ကိုစွဲလန်းပြီး ဘယ်မှမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံးရေကန်နားမှာ နာဆစ်စပ်ဆိုတဲ့ ပန်းပင်ကလေးအဖြစ် ဘ၀ ပြောင်းသွားသတဲ့..။
ဒီလိုပဲ…အချို့ သော သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သလို့ ပြင်လို့ မဆုံး၊ ကိုယ့်ပုံရိပ် ကိုယ်စွဲလန်းလွန်းရင် ဒီနာဆစ်ဆပ်ရောဂါ ဖြစ်တယ်ပြောကြတယ်..။ ဆီမွန်ဒီ ဗိုးဗွား Simone de Beauvoir ရဲ့“the second sex” ကို ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်တဲ့ ဒုတိယလိင် စာအုပ်ထဲမှာတော့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေဟာ ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်လို့ ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးတယ်..။ အဘိဓမ္မာနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ဒီ Selfie ဆိုတာ ကြွားဝါလိုတဲ့ လူ့ သဘော….မာန ဆိုတဲ့ ကိလေသာပေါ့..။ လူဆိုတာ မကြွားရ မနေနိုင်သတ္တ၀ါကိုး..။ “အနည်းဆုံးတော့ ရောဂါချင်းတောင် ကြွားကြတယ်” ဆိုတဲ့ ဦးဇောတိက ဟောတဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ကို သွားသတိရမိသေး..။ ငါ့ရောဂါက ဂျာမနီက ဆေးနဲ့ မှပျောက်တာ…ငါ့ အဖေက အင်္ဂလန်သွားကုမှပျောက်တာ ဘာညာပေါ့လေ…:D
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်မှာရော ဒီလို နာဆစ်ဆပ် ရောဂါများရှိနေသလား ပြန်မေးကြည့်မိတယ်..။ မိန်းကလေးလည်းမဟုတ်၊ selfie လည်းတင်လေ့မရှိတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်း သဟ လို့ ဖြေသိမ့်လိုက်နိုင်တာပေါ့လေ..။ ဒါပေမယ့်လည်း မျက်နှာဖုံးမျိုးစုံ profile picture တပ်နေတော့ split personality ရောဂါဖြစ်နေဖို့ များပြန်ရော..။ မျက်နှာများတဲ့ ဒဿပေါ့လေ… :D
ဒီဖွဘုတ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရည်စားတစ်ယောက်ကတော့ ရုပ်ဆိုးဆိုး ဆိုကရေးတီး ပရိုဖိုင်းပုံကြီးးနဲ့ ရခဲ့တာ..။ ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ ရုပ်ဆိုး၊ အပေါက်ဆိုးပေမယ့် အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ ကြတော့ အပြောချို၊ မနောဖြူ လူချောလူလှ …ကိုရီးယားမင်းသားလေးလို ထင်သွားလို့ ဖြစ်မယ် :D ။ အဲ…အပြင်မှာ သူနဲ့ ဖက်ပြိုင်ပြီး ငြင်းခုန်ခဲလှပေမယ့်…. အင်းလိုက်တတ်တဲ့ encourager တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်…ဒီဖွဘုတ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ထင်ရာ မြင်ရာတွေကို အိတ်သွန်ဖါမှောက်ရေးတာကို…သည်းညဉ်း မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ဒီရည်းစားကပဲ ကိုယ့်ကို အန်ဖရန့် သွားပြန်ရော… :D
တဖက်မှာလည်း.. အတူတူ ပညာသင်ဖက် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံအစစ်အမှန်တင်ပြီး ရေးတာပြောတာ၊ ငြင်းခုန်တာလုပ်တော့ ကိုယ့်ကို ဘလော့ဂ်သွားလို့မိတ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံကရှိနေပြန်ရော...။ တချို့ ကလည်း ချစ်စရာ သီလရှင်ပုံလေးတင်ထားတာ တွေ့ လို့“ဆရာလေးလား” တဲ့ မေးကြလို့ ”yes” လို့ ဖြေတော့ “OMG” လုပ်သွားကြပြန်တယ်..။ အမှန်က ကိုယ့်အညာမှာ ကျောင်းဆရာပေါက်စ ကို ခေါ်တဲ့ “ဆရာလေး” လို့ ဆိုလိုတာကို မသိတာ…ဟဟဟ :D ။ အချို့ ကကြလည်း လေယူလေသိမ်းကို ဖမ်းပြီး “ ဦးလေး ” တဲ့..။ ဒါနဲ့ ပဲ..ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာဖုံး ဟာ အမျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့လေ…။ :D
တကယ်က ဟန်ဆောင်မှုလောကကြီးထဲမှာ…ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တပုံရိပ်အစစ်အမှန်ကို ဒီမှာအမှန်တကယ်…တွေ့ နိုင်တာ..တွေ့ နေရတာက.. မိတ်ဆွေဖြစ်မှုကို တန်ဖိုးထားတာလို့ယူဆရင်ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား…။ ဘာရယ်မဟုတ်… selfie ဆိုတာ မူရင်းအစစ်အမှန် self နဲ့ နီးစပ်ဖို့ရာနှုန်းပြည့်မှန်ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရောက်တတ်ရာရာတွေးမိတာတွေပါ....။ :D :D :D
04/13/14--13:50: စစ်သားဆိုတာ ....
ပွဲကိုလာကြည့်တဲ့ အဘွားအရွယ် ဆရာမကြီး နှစ်ယောက်က ကျနော့်ကိုပြောတယ်....
"မင်းရဲ့အက က အရမ်းကို ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကပဲ ... ငါတို့ တစ်ခါမှ အဲလို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အကမျိုး မကြည့်ဖူးဘူး မမြင်ဖူးဘူး... အဲဒါဘယ်လိုအကမျိုးလဲ... ယောက်ျားလေးအကလား... မိန်းကလေးအကလား.... ဘယ်နိုင်ငံကလာတာလဲ... ဘာလူမျိုးလဲ"တဲ့...
ကျနော်လည်း ကိုယ်သိသလောက်နဲ့ တတ်သလောက်ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ် ...
"ကျနော်က မြန်မာနိုင်ငံကပါ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ဆိုတဲ့ လူမျိုးကြီး(၈) မျိုးအတူတကွနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်... လူမျိုးတိုင်းမှာ သူ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်စီ၊ ဘာသာစကားကိုယ်စီရှိပါတယ်... ကျနော်ကတော့ ဗမာလူမျိုးပါ... ကျနော်ကသွားတဲ့အက က ဗမာလူမျိုးအကတွေထဲက သူငယ်တော်အကလို့ ခေါ်ပါတယ်... ယောက်ျားလေးနေနေ မိန်းကလေးနေနေကလို့ရပါတယ်.... ကလေးလေးအကပေါ့ဗျာ.... အဲဒါကြောင့် ကျနော့်ပုံက ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ပျော်ရွှင်ပြီး အရမ်းချစ်စရာကောင်းနေတာပေါ့.... ကျနော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေမှာ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကတွေအများကြီးရှိသေးတယ်... သင်္ကြန်အက... ရေကစားတဲ့ပွဲနှစ်သစ်ကူးပွဲမှာကတဲ့အကမျိုးပေါ့... ၊ မင်းသားအက၊မင်းသမီးအက၊ အပျိုတော်အက... ယောက်ျားမယူရသေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကတဲ့ အကမျိုးပေါ့..... အဲဒီအကတွေအပြင် ဘီလူးအကတွေတောင်ရှိပါသေးတယ်.. ဘီလူးအကဆိုတာကတော့ ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တန်ခိုးရှင်မျိုးပေါ့... နောက် တခြားလူမျိုး (၇)မျိုးမှာလည်း သူတို့လူမျိုးအလိုက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကတွေအများကြီးရှိပါတယ်...."စသဖြင့်ပေါ့ ...
စကားတွေပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာ အမှတ်တရဓါတ်ပုံလေးရိုက်တဲ့အခါ ကျနော်ကသူငယ်တော်ပုံစံလေးလို စတိုင်ပေးတော့... အပျော်တွေကူးစက်သွားတယ်ထင်ပါ့ရဲ့.... လမ်းလျှောက်တာတောင် တုန်ချိချိလျှောက်နေရတဲ့ အဘွားအရွယ်ဆရာမကြီး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ကတော့ ကျနော့်လက်ကိုကိုင် အားယူပြီး ကျနော့်ပုံစံအတိုင်း ခြေထောက်လေးတစ်ဖက်မြောက်ပြီး မရမကလိုက်လုပ်ပါတယ်... ကျနော်ပြခွင့်ရလိုက်တဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုကြောင့် သူတို့ရင်ထဲမှာ တဒင်္ဂတော့ ပျော်ရွှင်သွားတယ်ဆိုတာ သူတို့တွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်က အပြုံးလေးတွေကို ကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်....
နိုင်ငံရပ်ခြားဖြစ်တဲ့ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ပညာတော်သင် စေလွှတ်ခံရတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာကျောင်းသားများဟာ အခြေအနေ အချိန်အခါ အားလျော်စွာ အခါအခွင့်ကြုံတိုင်း မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများကို ကြိုးစားပြသလျက်ရှိပါတယ်....
အခုတစ်ခါမှာလည်း ကျနော်တို့ Moscow Power Engineering Institute (MPEI တက္ကသိုလ်) ရဲ့ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများကပွဲ နဲ့ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် သူငယ်တော်အက နဲ့ ရှမ်းအိုးစည်အက ကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်....
ကျနော်တို့ဟာ သဘင်သည်တွေမဟုတ်ပေမယ့်လို့ နိုင်ငံတကာအလည်မှာ အမြင်တင့်တယ်အောင်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ကြိုးစားပြသနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်....
လူ... ဆိုပြီးဖြစ်လာရင် မျိုးရိုးဇာတိဆိုတာ ရှိစမြဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်.. ကမ္ဘာမှာ မျိုးရိုး မရှိတဲ့ လူ ဆိုတာ မရှိပါဘူး... လူ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ နဲ့ မျိုးရိုး ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ပေါင်းမှ လူမျိုး ဆိုပြီး ဝေါဟာရ ဖြစ်လာတာပါ....
လူတိုင်းမှာ အသက်ကိုယ်စီရှိပါတယ်.... အဲလိုပဲ လူမျိုးတစ်မျိုးချင်း စီမှာလဲ လူမျိုးရဲ့ အသက် ဆိုတာ အသီးသီး ရှိကြပါတယ်..... လူမျိုးရဲ့ အသက်ရှင်မှ အဲဒီလူမျိုးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာလည်း ကြာရှည် တည့်တံ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.... အဲဒီ လူမျိုးရဲ့ အသက်ဆိုတာကတော့ အခြားမဟုတ်ပါဘူး .... "ယဉ်ကျေးမှု"ပဲဖြစ်ပါတယ်....
လူမျိုးရဲ့ အသက်ဟာ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်တာကြောင့် ယဉ်ကျေးမှု ခိုင်မာလေလေ အဲဒီလူမျိုး မပျောက်ကွယ်ဘဲ ကြာရှည် တည်တံ့လေလေ ပဲဖြစ်ပါတယ်.... ရေအတိမ် အနက် ကို ကြာရိုးကြာစွယ် တို့ကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်.... လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ပညာရှိ၊မရှိကို အဲဒီလူရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်.... အဲဒီလိုပါပဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ အဆင့်အတန်းဆိုတာကို ထိုနိုင်ငံ၊ ထိုလူမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်.....
မိဘတွေပေးတဲ့ အမွေကို အမွေဆက်ခံတဲ့ သားသမီးက ကောင်းကောင်း မထိန်းသိန်းနိုင်ပဲ ပျက်စီးသွားရင် အဝဇာတ အမွေခံ လို့ခေါ်ပါတယ်.... ပကတိ အတိုင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အမွေခံကို အနုဇာတ အမွေခံလို့ ခေါ်ပါတယ်.... ပေးအပ်ခဲ့တဲံ အမွေထက် ပိုပြီး သာလွန်အောင် တိုးပွားအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အမွေခံကိုကျ အတိဇာတ အမွေခံလို့ ခေါ်ပါတယ် ဆိုပြီး မှတ်သားဖူးပါတယ်.....
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ခေတ်မှီအောင် ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံး အဖက်ဖက်က ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဖက်ကလည်း ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဘိုးဘွားအမွေဖြစ်တဲ့ ချစ်စရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များကို မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်.... ယဉ်ကျေးမှုအမွေမရှိရင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေကိုမသိရင် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ဆိုတာလဲ ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး... ကိုယ့်နိုင်ငံက ဘိုးဘွားယဉ်ကျေးမှုအမွေကို ကိုယ်တွေမှ မထိန်းသိမ်းရင်ဘယ်သူကထိန်းသိမ်းမှာပေးမှာလဲ.... ယဉ်ကျေးမှုပျောက်ရင်... အမျိုးသားရေးစိတ်တွေပျောက်ပြီး ... လူမျိုးပါပျောက်နိုင်ပါတယ်...
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့တွေ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုပြီး ဆက်လက်ရှင်သန် တိုးတက်နေစေဖို့အတွက် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာအမွေအနှစ်များကို ပပျောက်မသွားအောင် လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာဟာ ... ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်....
Photographer ကတော့ ကျနော့်ရဲ့ ဂါဒီအကိုကြီး ကိုNyan Linn Aungပေါ့ဗျာ
04/13/14--13:57: ထိန်းသိမ်းသင့်ပေ ယဉ်ကျေးမှုအမွေ
Post by Kyaw Si Thu.
မိဘတွေပေးတဲ့ အမွေကို အမွေဆက်ခံတဲ့ သားသမီးက ကောင်းကောင် မထိန်းသိန်းနိုင်ပဲ ပျက်စီးသွားရင် အဝဇာတ အမွေခံ လို့ခေါ်ပါတယ်.... ပကတိ အတိုင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အမွေခံကို အနုဇာတ အမွေခံလို့ ခေါ်ပါတယ်.... ပေးအပ်ခဲ့တဲံ အမွေထက် ပိုပြီး သာလွန်အောင် တိုးပွားအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အမွေခံကိုကျ အတိဇာတ အမွေခံလို့ ခေါ်ပါတယ် ဆိုပြီး မှတ်သားဖူးပါတယ်.....
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာလူမျိုးများ (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကြီး (၈)မျိုးလုံးကိုဆိုလိုပါသည်) ကမ္ဘာမှာ ဆက်လက်ရှင်သန် တိုးတက်နေစေဖို့အတွက် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ရိုးရာအမွေအနှစ်များကို ပပျောက်မသွားအောင် လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာဟာ ... ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်...
04/14/14--13:16: Burma, Buddhism and Neutralism
04/14/14--13:23: WWII RARE COLOR FILM BURMA2of3JAPAN RETREA
04/14/14--13:28: WWII BURMA CONDUIT TO INDIA 1 of3RARE COLOR
04/14/14--13:29: WWII RARE COLOR FILM BURMA3of3BATTLE FOR MAND
04/16/14--05:16: ကရိုင်းမီးယား နှင့် ရောက်တက်ရာရာ
Control Theory ရဲ့ History တွေ စသင်တော့ Control War ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမိုင်းကိုဖတ်ရတယ် ။ ရှေးဂရိတွေ ခေတ်က ဘုရင်မတစ်ပါး ဟာသိပ်ဥာဏ်ထက်ပါသတဲ့။ ဘုရင်မ ဆိုပေမဲ့ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်လို သိပ်ပြီးစစ်တိုက်တော်တယ်လို့ ဆိုတယ် ။ တစ်ရက်တော့ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲ မှာ အင်အားတွေ သုံးပြီးတိုက်ပေမဲ့ တစ်ဖက် က မြေအနေ အထားအသာကြီးနဲ့ ခံစစ်ဆင်တဲ့ခါ သူ့စစ်သည်တွေအတုံးအရုန်း ကျရှုံးကုန်ပါတယ် ။ အဲဒီချိန် ဘုရင်မ က စစ်အရှိန်
သတ်ပြီးစစ်ရေးပြန်သုံးသပ်ပါတယ် ။ စစ်ရေး အကဲ ကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတုန်းမှာ တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့ မြို့က ဘုရားကျောင်း က နေ ရှေ့မျက်နှာပြင် မြစ်ကိုကျော်ပြီး ပျံသန်း လာကြတာ ကိုတွေ့
တဲ့ခါ ..အဲဒီ ငှက်တွေ အားလုံး ကို ဖမ်းစေပါတယ် ။ ပြီးတော့ ငှက်တွေ ရဲ့ ခြေထောက်မှာပြတ်ရှစေတဲ့ သံဓားအစ ကလေးတွေ တပ်စေတယ် ။ ငှက် အချင်းချင်း ထိ ခိုက်မိတဲ့ခါမှာလည်း သံချင်းထိခတ် မိပြီးတော့ မီးပွင့် စေတယ် ။
အဲဒီ နည်း နဲ့ ပဲ ငှက်တွေ အားလုံး ကို တချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း အားလုံးပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့ခါ ရန်သူ ရဲ့ မြို့ တော်ဆီ ကို တစ်ဟုန်ထိုး ပြန်သန်းသွားကြတယ် ။ငှက် တွေ ခြေမှာ တပ်ပေးလိုက်တဲ့ သံ တွေ ရဲ့ သက်ရောက်မှု ကနေ တဆင့် ရန်သူ မြို့ ရဲ့
အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဘုရားကျောင်း ကြီး မီးလောင်စေတယ် ။ ရန်သူစစ်သားတွေကိုထိခိုက်စေတယ် ။ ပြီးတော့ မြို့ ကြီး ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းပြီး တစ်ဖက်ရန်သူကိုအလုပ်များစေတယ် ။ ရန်သူ့ တပ်တွေ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်နေချိန် ၊ တစ်ဖက်ရန်သူ
အလုပ်များချိန်မှ အလစ်အငိုက်ယူပြီး သူ့ တပ်တွေရဲ့ အတားအဆီး ဖြစ်စေ တဲ့ မြစ်ကိုဖြတ်စေခဲ့တယ် ။ ရန်သူမြို့ ကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင် စေခဲ့တယ် ။ ဒီ ရှေး အကျဆုံး ၊အရိုးရှင်းဆုံး Basic Concept မှ သည် ခေတ်မှီတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး လူသားတွေ ရဲ့ Control War (သို့) ကန့်သတ်မဲ့ စစ် ဆို ရဲ့ သဘောသဘာဝတွေ ဖြစ်ပေါ် လာကြတယ် လို့ဆိုတယ်။
ပထမ လူတို့ သွားရောက် နိုင်ခွင့် နည်းပါးတဲ့ နေရာတွေ ကို အမြောက်တွေ ၊စိန်ပြောင်း တွေ နဲ့ အရင် ပစ်ကြတယ် ။ ရည်ရွယ်ရာ Target ဆီကို အမြောက်ဆံ တစ်ခုပစ်လွှတ်လိုက်တယ် ။ တို်က်ရိုက်ထိ မှန်မှု သာရှိပေမဲ့ ပေါက်ကွဲအား ၊ သက်ရောက်တဲ့နေရာအကျယ်အဝန်း ဟာ စိတ်ကျေနပ်စရာ မဖြစ်သေးဘူး ။ အဲဒီ နောက် အမြောက်ဆံ ပေါက် ကွဲ မှု စနစ်တွေ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ် ။ ပေါက်ကွဲအား ကောင်းလာတယ် ။ သက်ရောက်တဲ့ ဧရိယာကျယ်လာတယ် ။ ဖျက်ဆီးဆွမ်းအားကြီးလာတယ် ။ သို့သော် Target ကို ထိမှန် နိုင်တဲ့ Precision တွေ ဟာ ပစ်တဲ့ သူရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ၊ လေတိုက်နှုန်း ၊ ရာသီဥတုအခြေနေတွေ ပေါ် အများကြီးမူတည်နေသေးတယ် ။ ပစ်လွှတ်ပြီးမှ ထိန်းချုပ် နိုင်စွမ်း မရှိကြသေးဘူး ။ မိမိ လိုလားရာ Target တစ်ခုခု ကို ပစ်လွှတ်လိုက်ပေမဲ့ တိတိကျကျထိမှန်ခြင်းမရှိ ပဲ လွဲချော်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ failed state ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျည်တစ်တောင့် ပစ်လွှတ်တိုင်း ၊ ပစ်လွှတ်တိုင်း လိုရာ Aim ကိုရောက်အောင် ၊ Precision တွေ ကောင်းလာအောင် ၊ လွဲချော်မှု ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဖြစ်အောင် လူတွေ က တီထွင်ကြံဆလာကြတယ် ။
အဲဒီနောက်တော့ ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ကျည် ၊ အမြောက်ဆံ တစ်တောင့် ဆို တဲ့အမြင်ကနေ control object တစ်ခု အဖြစ် ပြောင်းလဲ လာကြတယ် ။ ထိမှန်ရမဲ့ targetကို aim အနေနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်မယ် ။ ထိပ်ဖူးမှာ ဆန်ဆာ (sensor) တပ်ပြီး input signal တွေအဖြစ်ဖမ်းယူမယ် ။ ရှာတွေ့ တဲ့ signal တွေကို feedback ပြန်ပေးတယ် ။သူလိုချင်တဲ့ aim ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ ကို data တွေ ပြန်ပြီး regulate လုပ်ကြည့်မယ် ။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ target မရောက်သေးတဲ့ခါ ဆက်လက်ပျံသန်းမယ် ၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့
target ကိုရောက်တဲ့ခါ ၊ input signal နဲ့ aim နဲ့ ကိုက်ညီသွားတဲ့ခါ ထိမှန်ပေါက်ကွဲခြင်းဆိုတဲ့ output ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။ အဲလို နည်းနဲ့ ပဲ လူသားတွေ ဟာ မပစ်လွှတ်ခင်တင်မက ၊ ပစ်လွှတ်ပြီးတဲ့ ချိန်ထိ Control လုပ် လာနိုင်ကြတယ် ။ ဒါတွေ ဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် missile တွေ ၊ Rocket တွေရဲ့ အခြေခံ အလုပ်လုပ် ပုံ concept တွေပါပဲ ။
အဲဒီနောက် အခြားနည်းပညာတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး လေထဲကိုပစ်လွှတ် ဂြိုလ်တုတွေ ၊command center တွေကနေတဆင့် ထိန်းသိမ်း ရွေ့လျား စေပြီးလိုချင်တဲ့နေရာရောက်မှ ထိရောက်ပေါက်ကွဲ စေတဲ့ Guided Missile တွေ ၊ Ballistic
Missile တွေ ၊ Anti-radiation missile တွေ ဖြစ်လာတယ် ။ ဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ က object တစ်ခုကို ပစ်လွှတ်လိုက်တယ် ၊ ထိန်းချုပ် နိုင်တယ် ၊ လိုအပ်တဲ့နေရာကို ကျရောက်ပေါက်ကွဲစေတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့် မှာပဲရှိနေပါသေးတယ် ။ သို့ပေမဲ့တိကျမှု Precision တွေ ၊ ရာသီဥတု ၊ လေတိုက်နှုန်း ၊ Medium မတူညီမှု စတဲ့ Noise ဖယ်ရှားနိုင်မှုတွေ ၊ ထိရောက်မှု ပမာဏ တွေ ကတော့ စိတ်တိုင်းကျစရာကောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက် တစ်ပိုင်း ပေါင်းစပ်မှု တွေ နဲ့ ဆန်းသစ်လာတာ က Droneနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။Drone မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Object တစ်ခုကိုပစ်လွှတ်လိုက်တယ် ၊ Control လုပ်နိုင်တယ် ၊ လိုချင်တဲ့ နေရာကို တိတိကျကျထိရောက်စေတယ် ၊ Mission ပြီးမြောက်တဲ့ခါ မူလ နေရာ ဆီကို ပြန်လာ နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့် ကိုရောက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ငှက် ကနေ Drone ထိ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲ လာတဲ့ Control War ရဲ့ သမိုင်းအကျဉ်းပါ ။
စစ်အေးခေတ် အပြီး ၊ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲ သွားပြီးတဲ့ နောက်မှာ ကမ္ဘာရဲ့ စူပါပါဝါ နိုင်ငံ ဟာ Bipolar ကနေ Unipolar ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ် ။ စစ်ရေးသဘောတရား တွေ ဟာ ခေတ်ကာလအခြေနေပေါ် လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတဲ့ ရွေ့လျားမှု မှာ self-defence ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်သုံးသပ်ယူဆမှုတွေ လည်း ပြောင်းလဲ လာခဲ့တယ် ။ ဟိုး ပဒေသရာဇ် ခေတ် က ဘုရင်တွေဟာ မင်းလောင်းပေါ်မယ်လို့ ကောလာဟလ ထွက်တာနဲ့ မွေးခါစ ကလေး ပါမကျန်သတ်သလို ပါပဲ ။ တပါးသူကို (ကိုယ်နဲ့ ပြိုက်ဖက်ဖြစ်လာနိုင်လောက်တဲ့သူကို) အားနည်းအောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာလည်း (တနည်းအားဖြင့်) မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျိုးပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု ကို အလိုအလျောက် ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေတယ် ။ ထိပ်တိုက်တွေ့ ဆုံမှု ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ထိခိုက်မှုသက်သာစေတယ် ။ ဒီအကြောင်းရာ ကို ပဲ Polite ဖြစ်အောင် သုံးတဲ့ခါ "မိမိအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း"ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေခဲ့ကြတယ် ။
အဲဒီအခြေနေမှာ ကန့်သတ်ဖို့ ခက်ခဲ လာတာ ကတော့ နည်းပညာ ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်မှု ဖြစ်ပါတယ် ။ ထိရောက်ပေါက်ကွဲအား ပြင်းထန်လှတဲ့ နြူကလီယား ထိပ်ဖူး တွေကို ၊ အကွာအဝေးကီလိုမီတာ များစွာပစ်ခတ်နိုင်ခြင်း ၊ အချိန်ကြာပျံသန်းနိုင်ခြင်း ၊ တိကျမှု ရှိခြင်း စတဲ့ ကွန်ထိုးနည်းပညာတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါ ICBM (Intercontinental ballistic missile) ဆိုတဲ့ ကျားပျံ ကြီး တွေ ဖြစ်လာတယ် ။ ဒီနေ့ တိုးတက်တဲ့ အင်အားကြီး နိုင်ငံ တွေ ကို အခြိမ်းခြောက်ဆုံး ကလည်း သူတို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အနာဂါတ် လူသားတွေ ရဲ့ ရှင်သန်ဖြစ်တည် မှု ကို အခြိမ်းခြောက်ဆုံး ကလည်း ကျားပျံကြီးတွေပါပဲ။ နြူထိပ်ဖူး လျှော့ ချရေးတွေ ၊ Ballistic နည်းပညာ ကန့်သတ်ရေးတွေ စာချုပ် တွေ အလီလီ ချုပ်ဆိုကြသည့်တိုင် ကျွန်တော့် လို အလုံပိတ် ကြီးကတော့ "ဘယ်ငတုံးမှ လက်ရှိက လက်မဲ့ အဖြစ်မခံဘူး"လို့ ယုံကြည်နေတုန်းပါပဲ ။
ကမ္ဘာမှာ ထိရောက်မှု အကွာအဝေး အများဆုံး နဲ့ အကောင်းမွန် ဆုံး ICBM ၁၃ ခု မှာ US က ၂ ခု ၊ ရုရှား က ၅ ခု ၊ တရုတ် က ၄ ခု ၊ အစ္စရေး နဲ့ အိန္ဒိယ က ၁ ခုစီ အသီးသီးပိုင်ဆိုင်ကြတယ် ။ တခါ အဲဒီ မဇိုင်းတွေကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ အချင်းချင်း ပစ်နိုင်အောင် ၊ ကိုယ့် နိုင်ငံ ဆီ လာတာ ကို သိအောင် Missile Defense System တွေ ၊ Air Defense System တွေ ကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ခေတ်မှီသထက်မှီအောင် ငွေ ကြေးတွေ အကုန်ကျခံတည်ဆောက်ကြရတယ် ။ တစ်ဖက်ကလည်း အဲဒီ Defense System တွေကို ချိုးဖျက်ဝင်ရောက်ပြီး ပေါက်ကွဲ နိုင်အောင် မစ်ဇိုင်းတွေကို နည်းပညာ မြှင့်တင်ကြပြန်တယ် ။ အောက် က ပုံလေး ကို ကြည့်ကြည့်ပါ ။
စက်ဝိုင်းခြမ်းလေးတွေ က အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေ မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Ballistic Missile Defense System တွေပါ ။ အပြာကလေးတွေ အနီလေးတွေကတော့ ICBM တွေ ပျံ သန်း နိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီပုံကတော့ ရုရှား ကနေ တစ်ချိန်တည်း ပစ်ခတ် နိုင်တဲ့ အခြေနေ ကို ပြထားတာ ပါ ။
ဒီပုံ ကတော့ တကယ်လို့ မြောက်ကိုးရီးယား သာ ICBM ပိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် US အတွက် ခေါင်းခဲ စရာ အားနည်းချက် နေရာကို ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ပုံလေးတွေကို သေချာကြည့်ပြီး ခဏလောက်စဉ်းစား ကြည့်ပါ ။ စာဖတ်သူ (သို့) ကျွန်တော် တို့ သာ US နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်ရင် ဘာလုပ်မလဲ ။ စာဖတ်တာ ခဏလောက်နားပြီး စဉ်းစား ကြည့်ပါ ။ ပြီးမှ ဆက်ဖတ်ပါ ။ ရိုးရိုးလေး ပါ ။ ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ ရှိသမျှ အရာအားလုံး ဟာ Time Dependent ဖြစ်ပါတယ် ။ မစ်ဇိုင်းတွေ လည်း ပျံ သန်းလာဖို့ အချိန်လိုတယ် ။ ကိုယ့် နိုင်ငံ ထဲ ကို ပျံ သန်းမလာခင်မှာ ကြားကနေ ပစ်ချလို့ရအောင် နီးနီး နားနား နိုင်ငံတွေ ကို ကိုယ့်ဖက်ပါအောင်လုပ် ။ စစ်အခြေစိုက် စခန်း ဆောက် ၊Ballistic Missile Defense System တွေ ဆင်ပေး ၊ anti-missile system တွေ တပ်ပေးထားလိုက်တာပေါ့ ။ ကိုယ့် နိုင်ငံ ဆီ လာဖို့ ကြာချိန် စက္ကန့် ၅၀ ကြာမယ်ဆိုရင် ကိုယ့် ရေဒါ ထဲ ပေါ် မှ ပြန်ပစ်ချလို့ရမှာ ။ သူ့ နိုင်ငံ နား သွား စောင့် နေလိုက်တော့ စတက်ပြီး ၅ စက္ကန့် ကြာ တာနဲ့ ပစ်ချလို့ရတာပေါ့ ။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ ။
ရုရှား ပတ်ပတ်လည်မှာ လာဆောက်ထား တဲ့ US မစ်ဇိုင်းတွေပါ ။
ကိုယ့်ဖက်မပါရင်း ပါအောင်လုပ်လို့ မီးတောက်ခဲ့ရတဲ့ နေရာတွေ ။ လူ့အခွင့်အရေး ၊ ဒီမိုကရေစီရေး ၊ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားမှု စသဖြင့် ရှုထောင့် အမျိုး မျိုး ကနေ အမြင် အမျိုး မျိုး ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ခု ကျွန်တော် ကြည့်တာ က စစ်ရေး ရှုထောင့် က ကြည့်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူကရိန်း ကိစ္စမှာ သမိုင်းကြောင်းအရ ၊ နိုင်ငံရေးအရ ၊ စီးပွားရေးအရ သုံးသပ်ထားတာတွေ အများကြီး ဖတ်ရတယ် ။ ယူကရိန်း ကို သင်ခန်းစာယူပြီး မြန်မာ ပြည်အရှေ့ဖျား ၊ အနောက်ဖျားတွေ မှာ စိုးရိမ်နေကြတဲ့ အသံ တွေလည်းကြားရတယ် ။ကျွန်တော် ရေးတဲ့ စာမှာ ရုရှားယိမ်း လို့ ထင်စရာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ NATO အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံတွေကော ၊ အမေရိကန်ပါ မမှားကြဘူး ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကိုယ်နိုင်ငံကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ၊ ၄င်းတို့ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ဖို့ သူတို့မှာတာဝန်ရှိနေလို့ပဲ ။ ရုရှား ရဲ့ Ballistic ဟာ ဥရောပ နိုင်ငံတွေ ကျော်လွန်ပြီး အမေရိက ထိ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ် ။ အဲဒီ အတွက် ပထမဆုံး ရုရှားရဲ့ ဘေး က ပိုလန်မှာ BMDS ဆင်ခဲ့တယ် ။ နောက် နိုင်ငံရေး အရ အင်အားချိနဲ့လာတဲ့ ယူကရိန်းကိုပါ ဦးတည်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တကယ်လို့ ကရိုင်းမီးယား မှာ သာ Military Base ဖြစ်ခဲ့ရင် ပင်လယ်နက်ဒေသတစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒါ ကို သိတဲ့ ရုရှား ကလည်း လက်ဦးမှု ပြန်ယူတာဖြစ်ပါတယ် ။
ကရိုင်းမီးယား ပြသ နာမှာ ဘယ်သူမှားလဲ ဆိုတော့ ယူကရိန်းတွေ မှားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အတော်များများ ကတော့ မြန်မာ အရှေ့ဖျား အနောက်ဖျား တွေ စိုးရိမ် တယ်လို့ ဆိုတယ် ။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း အမြင်အရတော့ အဲဒီနေရာတွေ ဟာ ကရိုင်းမီးယား ဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ မတူညီတဲ့ နောက်ခံ အကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်ဖို့ ကောင်းတာ က အစွန်အဖျားတွေမှာ မဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အလယ်ဗဟို နှလုံးသားတွေ မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ယုံကြည်မှုတွေ ၊ တွေးခေါ် မှု တွေ သာ ကွဲမယ် ... ကိုယ့် နိုင်ငံ ကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးတွေတော့ တူညီိဖို့လိုတယ် ။ အဲဒီ ခံယူချက်လေး ကတော့ United ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ ယူကရိန်း ရဲ့ အချုပ် အခြာအာဏာ ကို ထိပါး ခံ ရတာ ဟာ အဲဒီ စိတ်ကလေး United ဖြစ်မနေလို့ပါပဲ ။ အဓိက သင်ခန်းစာ ယူ သင့်တာသည်လည်း အဲဒီအချက်ဖြစ်ပါတယ် ။
04/16/14--20:47: မင်းဇင်- သန်းစိုး (ဘောဂဗေဒ) ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်း
ဤနေရာတွင် လွပ်လပ်မှုကိုတောင့်တသော ခံစားချက်များ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ မြိုသိပ်မှုများ၊ မွန်းကြပ်လောင်ပိတ်မှုများ၊ လူတန်းစေ့ နေ နိုင်ရန်ခက်ခဲ့သော ဘ၀ရပ်တည်ရေး မျော် လင့်ချက်များ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာကွဟမှုများစသည့် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ နှစ်ရှည်လများ ခံစား ခဲ့ရ သော ဝေဒနာဒါဏ်ရာကို မည်သို့ နားလည်မှုပေးနိုင်ကြမည်နည်း ဆိုသည့် က လူမှုရေးအုံကြွမှုဖြစ်စဉ်(Social Mobiliza tion) အ တွက် ပထမ စတင် စဉ်းစား သင့်သည့် အချက်ဖြစ် ပါလိမ့်မည်။
လူမှုရေးအုံကြွမှုဖြစ်စဉ် ( Social Mobilization) သည်အကောင်းဘက်ကို ဦးတည်နိုင်သလား
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၃ နှစ်လုံးလုံး မြန်မာလူထုကား၊၂၀၀၄ မတိုင်မီထိ စစ်အုပ်ချုပ်ေ ရးနှ င့်တ ပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး၏ ဖိနှိပ် ချုပ် ခြယ်ရက်စက်မှုများ ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုနောက်ပိုင်းမှ ပုံသဏ္ဍာ န် အမျိုးမျိုးဖြင့် ကြုံတွေခဲ့ရ သော ဖိနှိပ်မှု၊ ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်များကို ယခု မှ စတင် ရင်ဖွင့်ခွင့်ရသော လူထု၏ အုံ ကြွမှု (Social Mobilization) ကို မည်သူက ကိုယ်ချင်းစာ ပေးနေသနည်း။ ဤသို့ ပေးဆပ်ခဲ့ရ သော မျက်ရည်များ၊ ဘ၀များ၊ မိသားစုများ၊ အိမ်မက်များ၊ ပညာရေးများ၊ လူငယ်များ၊ မျုိုးဆက်သစ်များ၊ ပြည်ပရောက်အလုပ်သမား များ၊ မိန်းမပျိုများ စီးပွားရေးများ၊ အိမ်၊ယာ၊မြေများ၊ အဆောက်အဦးများ စသည့်တို့အတွက်မည်သူက မည်မျှခံစားမျှဝေပေးနိုင်ပါသနည်း။
ထိုအချက်သည် လူထု၏ နိုင်ငံ ရေး အုံကြွမှု ရေချိန်အနိမ့်အမြင့်ကို ကောက်ချက်ချရန် လုံးဝ အမှန်တရား ဖြစ်နေကိုသည် ပြည်ပ မှနိုင်ငံ ရေးလေ့လာသူအားလုံးသိ သင့်ပါ သည်။ ယခုမှု ၂၀၁၁ အစိုးရသစ်၏ နိုင်ငံရေးစိတ်စေတနာအနည်းငယ်ဟပေးထားခြင်းဖြင့် လူထု၏ နှစ် ရှည်လများ မြို သိတ်ခဲ့ရသောဒုက္ခ အ၀၀ အား အလုံးစုံသော ထုတ်ဖော်မှုများဖြင့် ပြည်သူလူထုက စတင်လာခြင်းသည် social mobiliz etion ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျင်မှား မည် မ ထင်ပါ။
ထိုပေး ထားချက်အကွက်သေးသေးလေးဖြင့် လူထု က ဆန္ဒပြခြင်း၊ လူ အခွင့်အေ ရးေ တာင်းဆိုခြင်း၊ တရုတ်တို့၏ စီမံကိန်း များ အားဆန့် ကျင့်ခြင်း၊ မြစ်ဆုံ အနိုင် ကျင့်မှုများ၊ မတရား သိမ်းယူခဲ့သော လယ်ယာမြေယာများ၊ စီးပွားရေးနွမ့်နစ်မှုများ၊ တရားဥပဒေအနိုင်ကျင့်မှုများ၊ လျပ်စစ်မီး အပါအ ၀င် ပြည်စုံ လုံလောက်စွာ မဖန် တီး ပေးနိုင်ခဲ့သာ ကျောထောက်နောက်ခံ ပံပိုးမှုများ အလုံးစုံအတွက် ယခုလို ဆန္ဒပြ ထုတ်ဖော်ခြင်းသည် ရသင့် သည် အခွင့်အရေး ထိုက်တန်သည့် ဆုလာဒ်အသေးစားအနေဖြင့် နိုင်ငံေ၇းသုံးသပ်သူ ကိုမင်းဇင် သဘော မ ထား သင့်ဘူးလား ဆိုသည်ကို မေးမြန်းလိုပါသည်။ လူမှုရေးအုံကြွမှုသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အကျဘက်သို့ဦးတည်နေ သော အနှုတ်လဏ္ခ ဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးပုံရိပ်များ ဟု ပြည်ပမှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် တော်တော်များများ ကောက်ချက်ချ သည်မှာ တဘက် သတ် ဆန် လွန်းပါသည်။ မိမိတို့၏ ခံစားခဲ့ရသော မြိုသိပ်ခဲ့ရသော၊ ပေးဆပ်ခဲ့ရသောအချိန်ကာလများကို ပျက်ရည်ပြုနေသယောင် ဖြစ် နေပါသည်။
မိမိတို့၏ ဘ၀၊ မိမိတို့၏ခံစားချက် ကိုဘယ်သူမှ အပြည့်အ၀မျှဝေခံစားပေးနိုင်ခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ကို ယ် ခြင်းစာ ပေးနိုင်သည်ဆို သည်မှာလည်း မုသားသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ယခု ဖြစ်ပေါ်နေသော လူထုအုံ ကြွမှု ( Social Mobilization )ကို တင်စား သုံးခြင်း သည် မည်သည့်ဘက်က ကြည်ပြီး ထိုက်တန်ပါသည်ဟု ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ပါသနည်းကို ဖြေပေးနိုင်လျင် အမှန်တရား နှင့်နီးစပ်သွားပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော မြန်မာပြည်သူလူ ထု၏ နှစ်နာမှုများကား နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် ရှိလာခဲ့ပြီ မဟုတ်လား။
နိုင်ငံရေးဓလေ့အရ အစိုးရသစ်သည့်စစ်မှန်သောပြောင်းလဲရေးကို အမှန်တကယ် ခြေဦး တည့်ပြောင်း လည်း ရေးလုပ်နေသလား ဆိုသည့် အချက်သည့်တဖက်က လူထု၏ တုန့်ပြန်မှု အနိမ့်အမြင့်နှင့် တိုက်ရိုက်အ ချိုး ကျနေ ပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစိုးရ ၏ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးသည် ရွှေရည်စိမ်ဖြစ်ပါက လူထု ပေးထားချက် သေးသေးအတွင်းမှ လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာများ၊ ဆန္ဒပြမှုများ ကို ပြုလုပ်ကြမည် သာဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏ ပြုပြင် ပြောင်းလည်း ရေးသည် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၊ အညီအမျှ ခံစားမှု လူမှု အဆင့်တန်း မြင့်တက်လာမှု ရှိလာပါက လူထု၏ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုများသည် လျော့ကျ လာနိုင်စရာ သာရှိ ပါသည်။ ထို အချက်ကသာ အစိုးရ၏ပြုပင်ပြောင်း လဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လူထုအုံကြွမှု ရေချိန် အနိမ့်အမြင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေကြောင်း နိုင်ငံ ရေး ပေတံ တခုဖြင့် တိုင်းသင့်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာ မှာ မီဒီယာများတွင် မကြာခဏ ဖော်ပြနေသာ သမီးကလေး ကျေးရွာ ဖယ်ရှား ခြင်းခံရသည့် စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေဖွယ် ဖြစ်ရပ်က ကျန်မြန်မာပြည်သူလူထုအား မည်သို့ message ပေးနေသနည်းကို စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ပင် သိ နိုင်သည်။
ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း(သို့) ခေါင်းဆာင်မှုအပြောင်းအလဲကနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက် လားခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြပ်အတည်း ဆိုသည်နှင့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်း၊ အရည်အသွေး ကို လည်း ထည့်သွင်းစဉ်း ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအတူ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အရည် အသွေးနှင့် အတိတ်၏ အုပ်ချုပ်မှု နိုင်ငံရေးအာဏာများကြောင့်မည်မျှ စီးပွားရေးနိုင် ငံရေး၊လူမှုရေး၊ စသည့်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရလာဒ်များယူဆောင်လာသနည်းဆိုသည့် သမိုင်းသက်သေ ကိုလည်း ပြစ်ပယ်ထား၍ မရပါ။
ယခုအချိန်တွင်မှု လက်ရှိခေါင်းေ ဆာင် ၏ အရည်အသွေးရှိမရှိကို တိကျစွာခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း၊ နှောင်လာလတန့်သော ခေါင်းဆောင် သည် တိုင်းပြည်စီမံအုပ်မှု၊ ဖွံဖြိုး မှုအတွက်ခေါင်း ဆောင် ၏မှုအရည်အသွေးရှိမရှိ ကိုမည်သူမျှတိကျစွာမခန့် မှန်းနိုင်သေးပါ။ ယခု သမ တ ဦးသိန်း စိန် နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလ သုံးနှစ်လွန်မြောက်လာပြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့် တိုး တက်မှုများ၊ တိကျ သေခြာ သော စီးပွားရေးပေါ်လစီများ၊ ပုဂလိကကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်များ၊ တိုင်း ရင်းသားဒေသဖွံဖြိုးရေးများ မည်မျှ စွမ်းစွမ်းတမံ အောင်မြင် ခဲ့သနည်း။ ထိုသို့စဉ်းစစ်ရန် အတွက် တိုင်းတာ သော နည်းများကို မည်သည့်ပညာရှင်က ထောက်ပြဘူးသနည်း။ ဤအချက်ကိုမည်သည့် နိုင်ငံရေးပညာရှင်ကမှ ဝေဖန်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
ဆိုရလျင် အတိတ်က ခါးသီးသော အုပ်ချုပ်မှု ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့် ထိုအရိပ်လွှမ်းမိုးမှု မှ လွတ်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်သေး သောသူ သည် ယခု အပြောင်းအလဲ ကို ဦးဆောင်သူ ဖြစ်နေခြင်းကို သန်း ၆၀ သောလူထုက သိနေခြင်းကြောင့် ခေါင်းဆောင်မှု အပြောင်းအလဲ ကို လိုလာခြင်းမှာ ဒုတိယဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နိုင်ငံရေးဆန္ဒ တရပ်သာ ဖြစ် ပါသည်။
ထိုအတွက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရွေးချယ် မှုပြဿနာသစ်ကိုလူထုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါက စစ်မှန်ေ သာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြစ်ထွန်းရန်သာ ရှိသည်။ ထိုအတွက် ၅၉ (စ)အပါအ၀င် တဖက်သတ်ကျသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ ရန် မြန်မာပြည်တနံတလျား လူ ထု ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်။
စစ်ဘက်အသွင်ပြောင်းထားသောအရပ်ဘက်အစိုးရ ဦးဆောင်မှု ရလာဒ်သည် ပြည်သူ လူထုအတွက်တစုံတရာ ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးလျင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ ကိုလိုလား နေသော လူထု၏ အိမ်မက်ဖြစ်နိုင်စရာရှိသည် မှာ အမှန်တရားနှင့်ပိုမို နီး စပ်နေပါသည်။ ဤတွင် အချို့ခေါင်းဆောင်များက ဖွံဖြိုးရေး နှင့်မနှီးနွယ်ေ သာ၊ ရေရှည်တိုး တက်မှုအတွက်မဟာဗျုဟာကျကျ ချဉ်းကပ်စဉ်းစားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူလူထု၏အမျီုးရေးဝါဒ နဲ့ နီး ကပ်စေရန် ဘာသာရေးနွယ်သော ဥပဒေ(၄)ခုအတည်ပြုခြင်းမျိုး၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများပြုလုပ်ခြင်းမျိုး၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အ ပြောင်း အ လဲများပြုလုပ်ရန်လေသံဖြစ်ခြင်းမျိုးဖြင့် မဟာဗျူဟာချလာသည်ကို တွေမြင်နေရပါသည်။
ယခု ပညာရှင်ပေတံဖြင့် တိုင်းတာရန်လိုအပ်လာသည်။ ယခုအပြောင်းအလဲတွင် drive of change အပြောင်းအလဲကို မောင်းနှင် သော လူပုဂိုလ် (Personal) ၊ အဖွဲ့အစည်း (Institution) ၊ ပုံသဏ္ဍာန် (Structure) တို့ကား မည်သို့နည်းကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလို သည်မှာ မည်သည်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများကပြောင်းလဲမှုကိုဦးဆောင်နေသနည်း၊ နိုင်ငံသည် ပုဂိုလ်ရေး အခြေပြုသည့် ပြု ပြင် ပြောင်းလည်းရေးထက် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာဘောင်သွင်းခြင်းနည်း ကို မည်မျှ များများ စားစားအသုံးပြုနေသနည်းကို ကိုမင်းဇင်ဖြေသင့် ပါသည်။
အခြားတဖက်တွင်စဉ်းစားရန်လိုသည်မှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲရုံဖြင့် တိုင်းပြည်၏ ပျက်စီးအမြစ် တွယ်နေသော စနစ် (structure and system )သည် ခေါင်းဆောင်မှု၏ ပြောင်းလဲမှုအရှိန်အတိုင်း လိုက်ပြောင်းနိုင်စွမ်းအား ရှိပါသလား။
မိမိတို့က စနစ်ကို ပြောင်း ရမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်တခု လုံး ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစနစ် ပြုပြင် ပြောင်း လဲခြင်းအတွက် လူထု ၌ အင်အား (Strength) ရှိရမည်။ လူထု၌စွမ်းအား( Power) ရှိရမည်။ ခေါင်းဆောင်တွင်လည်း စစ်မှန် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆန္ဒပြင်း (Desire) ပြရ မည်ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် စနစ်က အရေးကြီးသလား၊ ခေါင်းဆောင်မှုပြဿနာက အရေးကြီးသလားဆိုသည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ရန် လိုအပ်သည်။ ထိုမှမ ဟုတ် စနစ်အပြောင်းအလဲကို မည်သည့်အချိုးမည် သည့်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် မဖြစ်မနေ လုပ် မည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအပြောင်းအလဲကို မည်သို့မ ည်ပုံ ကစားမည်ဆိုသည့် နှစ်ချက်ကို တပြိုက်နက်တည်း စဉ်း စားရန်ဖြစ်သလို တပြိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက်ရတော့အချိန်သို့ ကျရောက် နေပါပြီ။
ဤတွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလည်းက စနစ်တခုလုံးအပြောင်းအလဲကိုမည်ရွေမည်မျှ ဆွဲခေါ်နိုင်ပါသနည်းသည် အနာဂါတ်တွင် ဆက်လက် စဉ်းစားရမည့် မဟာဗျုဟာဖြစ်လာသည်။ ယခုမှု အစိုးရ၏ ဗျုရိုကရက်ယန္တရားတခုလုံး၊ ရှေ့ ရောက်နေသောစီးပွားရေးအုပ် စု များ အားလုံးသည် ယခင်စနစ် အကျင့်ဟောင်းများဖြင့် နေသားတကျလဲပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
လွှတ်တော် ရှိ ပါတီနိုင်ငံရေး အမတ်များ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် သူများအားလုံးသည် ပုလင်းတူဘူးစို့ ကြသူများသာဖြစ်သည်။ လက်တွေဖြစ်စဉ်များအရ သုံ့း သပ်ရလျင် နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတော်တော်များ(ပြည်ပရောက်လိုသူများလည်းပါဝင်သည်) နှင့် အစိုးရဗျိုရိုကရက်များ၊ ခရီုနီများသာ ကြီးပွားချမ်းသာပြီး အခွင့်ထူး ရသွားသော သက်သေသာဓကများရှိနေပါသည်။
ခေါင်းဆောင်ကမည်သို့ပြောင်းပြောင်း ထိုစနစ် (structure and system ) ပြောင်းနိုင်မလား ဆိုသည်မှာ မီးစင် ကြည့်ကရမည်ကိန်း သည် ပေးဆပ်ခဲ့ရသော နှစ်ကာလများအတွက် ထိုက်တန်ပါသလားဆိုသည်ကိုသိထားသင့်သည်။
၂၀၁၅ တွင် ယခုသမတက ဆက်လက် သ မတဖြစ်နေ ခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သမတဖြစ် လာခြင်းများသည် စနစ်(structure and system )ကို ပြောင်းလဲ ပေး နိုင် မလား ဆိုသည်မှာ ရာနှုန်းပြည့်မသေခြာနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော စစ်ဘက် ယူနီဘောင်း ပြောင်း လာသောအရပ်ဘက် ၀န်ထမ်း များအစီအစဉ်များကို အတော်မတတ်နိုင်သေးပါ။ ယခု အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ယနရား ကို လုပ်ရှားနေသော သူများမှာ စစ်ဘက်မှ ပြောင်း လာ သူများသာဖြစ်နေသေးသည် အချက် မှာ (structure adjustment)ကိစ္စကို ယခု အစိုးရမည်သို့မျှ မလုပ်နိုင်သေးကြောင်း ထင်ရှား သည့်သက်သေဖြစ်သည်။
အပြောင်းအလဲနောက်မလိုက်နိုင်သူများကို ချန်ထားခဲ့မည်ဖြစ် ကြောင်း သမ တပြောဆိုခဲ့သည် အချက် ကိုပင် ကတိ တည် ရန် ခက် ခဲနေပြီဖြစ်သည်။
ထိုအတူ သူရဦးရွေမန်းနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နှစ်ဦးကရော ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအ လဲကိုပြုလုပ်လိုက်ပြီ ဆိုပါကအကျင့်ဆိုး ၊စ ရိုက်ဆိုးများဖြင့်အမြစ်တွယ်နေသော စနစ် (structure and system ) ကိုပြောင်းလဲနိုင် မည်လားဆိုသည်မှာလည်း အာမဘန္တ ခံနိုင် လောက် သော နိုင် ငံရေးမဟာဗျူ ချပြမှုမရှိသေးပါ။
လူမှုရေးအုံကြွမှုက (Social Mobilization) တခုတည်းသောအဖြေ
စနစ် (structure and system) ကိုပြောင်းရန် လူထု၏ လူမှုရေးအလှုပ်အရမ်း အရွေ့ကသာ ရွေ့နိုင် မည်ဖြစ်သည်။ လူထု၏အား (peo ple power) အားကောင်းမှာသာ စနစ်ကြီးတခုလုံး အမြစ်တွယ်နေသော ယန္တရားတခုလုံးေ၇ွ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် လူမှု ရေး အုံ ကြွမှုဖြစ်ခြင်းသည် စနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သော အကောင်းဘက်ကဖြစ်ပေါ်စေနို င်သောနိုင်ငံရေးပုံရိပ် ( Political Positive Impacts) ဖြစ် ခြင်းကြောင့်ကြိုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက်လူထု၏စွမ်းအားကို စိတ်ရှည်စွာ ဖန်တီးတည်ဆောက်ရ မည်ဖြစ်သည်။
ထိုအချက်က မှန် ကန်သည့် ရလာဒ် ကောင်းများထွက်လာပါက လူထု၏ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်မှု (Political Trust)ကို ဗျုရိုကရက်များ၊ အစိုးရများကတ ဖန် ပြန် လည် ရ ရှိလာလိမ့်မည်ဟု တထစ်ချယူဆနိုင်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ပါ က အုပ်စိုး သူများအစိုးရများအတွက် ထိုက်တန်သော လူထု၏ ယုံကြည်မှု (trust) ကိုပြန်လည်ရရနိုင်မည်မှာ အပြန်အလှန်သဘောတရားဖြစ် နေ သည်။ (ဥပမာ ပတ်ချု့ဟီးနှင့် တောင်ကို၇ိးယား၊ ချန်ကေရှိတ်နှင့်ထိုင်ဝမ်၊ တိန်ရှောင်ဖိန်နှင့် တရုတ်၊ မဟာသီနှင့်မလေးရှား၊ လိကွမ်ယူနှင့် စင်္ကာပူ။ ထိုခေါင်းဆောင်များသည်တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးထားသော ခေါင်းဆောင်ကောင်းပိသမှု၊ မွန်မြတ်မှုကို ယခုတိုင် ထိုတိုင်းပြည် ပြည်သူပြည်သားများက ယုံကြည်ကိုးကွယ် သတိယ နေကြဆဲဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သလို တစ်ချိန်တည်းတွင် စနစ် (structure and system )အားပြောင်းလဲရန် စဉ်းစား လုပ်ဆောင်နေရမည်။ ထိုအတွက်လူထုအုံကြွမှု ( လူမှုလုပ်ရှားမှု) social mobilization အရှိန်ပြင်းစွာ ဖြစ်တည် နေခြင်းကသာ လူထု က စနစ် (structure and system) ကို ပြောင်းလဲနိုင်သော တခုတည်းသော ထွက်ပေါက် ဖြစ်နေအုန်း မည်မှာ အသေအခြေသာ ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် စာရေးသူ Local Thinker ၏ မှတ်ချက်သည့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပွံ ပညာရှင် ကိုမင်းဇင် နဲ့ ကွဲလွဲသော သုံးသပ်ချက်ဖြစ်နေ သည့် အချိန်အဆကို ပြည်သူကသာဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
သင်္ကြန်မှာ သရုပ်ပျက်ကြတဲ့လူငယ်တွေ၊ မြန်မာ့အမြင်နဲ့ ဟိရိသြတပ္ပကင်းမဲ့တယ်ပြောရလောက်အောင် ဖေါ်ကြချွတ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပုံတွေကိုမြင်တော့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သင်ယူခြင်းသီအိုရီ (learning theories) တွေကို သွားအမှတ်ရမိတယ်..။ ဒီအပြုအမူတွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ပြုကြသလဲဆိုတာပေါ့..။
စိတ်ပညာမှာ သင်ယူခြင်းဆိုတာ အပြုအမူအသစ်တစ်ခုကို (a new behavior) ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုတာကိုး။ ဒီနေရာမှာ သင်ယူခြင်းသီအိုရီတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ အပြုအမူဝါဒီတွေ (Behaviorists) ရဲ့ အကြောင်းဆက်ခြင်းသီအိုရီတွေကို ပြောချင်တာပါ…။ နားလည်ရပိုလွယ်မယ်ထင်မိလို့ ..။
J.B Watson တို့ လို Behaviorist ပညာရှင် အဆိုအရ “မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို သူ့ ကို ပေးပါ…ဒီကလေးကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသော်၎င်း၊ လူဆိုးသူခိုးမုဒိမ်းကောင်သော်၎င်း ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေး နိုင်ပါတယ်” တဲ့..။ တနည်းအားဖြင့် ကလေးငယ်ရဲ့ အဇ္ဈတ္တမှာ ပါခဲ့တဲ့ ပါရမီတွေ၊ စိတ်သတ္တိတွေ စသဖြင့် ဗီဇဆိုင်ရာ အခြင်းအရာတွေဟာ အရေးမပါ၊ ယုံတမ်းတွေမျှဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကလေးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအင်အားစုတွေကသာ အခရာကျတယ်လို့ ဆိုလိုက်တာပါပဲ..။ ဒီကစ လို့ ” ဗီဇ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်” ဆိုတဲ့ ငြင်းခုန်ပွဲ ကြီး အဆုံးမသတ် စခဲ့တာ ကနေ့ ထက်ထိတိုင်ပေါ့...။
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်တုန်းကတော့ စာပေဗိမာန် ဦးအေးမောင်ရေးတဲ့ နာမည်ကျော့် ” ဗီဇ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်” စာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးတယ်..။ ဆရာကြီးကတော့ ၂ ဘက်စလုံးအရေးကြီးပုံကို သုံးသပ်သွားတာ အမှတ်ရမိတယ်..။ ဥပမာ- လူငယ်တွေ စာဖတ်ဝါသနာ ပါခြင်းမပါခြင်းဟာ့ ” ဗီဇ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်” ၂ ခုစလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး။ အချို့ က အလိုလိုဗီဇကိုက စာဖတ်ရတာကိုနှစ်သက်တာ…အချို့ က ကိုယ့်ရဲ့ မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်းက စာပေကို တာဘိုးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေလို့ စသဖြင့်…။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်က ကျောင်းပြေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွဲနေမိရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းပြေးလိုတဲ့ ဗီဇ ပါနေတတ်တာမျိုး…။ တလောက ဆြာ တစ်ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးမိတဲ့ “ပါရမီ နဲ့ ဆရာကောင်း” ဆိုတာလည်း ဒီ ” ဗီဇ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်” အစ်ရှူးပဲ..။
ဒီ ” ဗီဇ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်” ဆိုတဲ့ ငြင်းခုန်မှုမှာ အပြုအမူဆိုင်ရာသင်ယူခြင်း သီအိုရီ (Behavioral Learning Theories) တွေရဲ့ ရည်တည်ချက်ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင် (သို့ ) ပြင်ပအကြောင်းတရားဗဟိုပြု အယူအဆဘက်က ခုခံချေပချက်တွေပဲ..။ ဒီနေရာမှာ အပြုအမူဆိုင်ရာသင်ယူခြင်း သီအိုရီ တွေလို့ ပြောလိုက်ရင် ရုရှပညာရှင် Ivan Pavlov ရဲ့ ”ရှေးမူအကြောင်းဆက်ခြင်း (Classical Conditioning)” နဲ့အမေရိကန် ပညာရှင် B.F.Skinner ရဲ့ ”ကိုယ်တိုင်ပြုအကြောင်းဆက်ခြင်း (Operant Conditioning)” သီအိုရီတွေက မသိမဖြစ်အရေးပါလာတယ်..။ ဒီသီအိုရီတွေမှာပါတဲ့ အကြောင်းဆက်ခြင်း conditioning ဆိုတဲ့စကား ဟာ အလွယ်ပြောရရင် တုံ့ ပြန်မှု တစ်ခု (response) ထွက်စေဖို့ လှုံ့ ဆော်မှုတစ်ခု (stimulus)နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာလို့ အလွယ်ပြောရင်ရမလားပဲ..။
Pavlov ရဲ့ ရှေးမူအကြောင်းဆက်ခြင်း လက်တွေ့ စမ်းသပ်ချက်မှာ ခွေးတွေကို လည်ချောင်းဖေါက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ တံထွေးပမာဏကို တိုင်းတယ်..။ အစာကိုမြင်ရင် ခွေးတွေဟာ တံတွေးထွက်လာတာ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ အလိုအလျောက် တုန့် ပြန်မှုပေါ့ (physiological reflex)။ ဒါကို Pavlov က အစာကျွေးတဲ့အခါတိုင်း ခေါင်းလောင်းတီးပြီးကျွေးတယ်…။ ဒီလိုနဲ့ ….ကြာလာတော့ ခွေးတွေဟာ အစာမပေးဘဲ အစာမရှိပဲနဲ့ လည်း…ခေါင်းလောင်းသံကြားယုံနဲ့ တံတွေးတွေထွက်လာတော့တာပဲ…။ ဒီစမ်းသပ်ချက်အရ…ပြောနိုင်တာက… တံတွေးထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ တုန့် ပြန်မှု (သို့ ) အပြုအမူဟာ ခေါင်းလောင်းသံကြားခြင်းနဲ့ အစာကိုမြင်ခြင်း ဆိုတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ လှုံ့ ဆော်မှု (stimulus) နှစ်ခု ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။ တစ်ခုက သဘာဝအလျောက် (Unconditioned)။ နောက်တစ်ခုက အကြောင်းဆက်ဖန်တီးပေးလိုက်လို့Conditioned။
ဒီနေရာမှာ…အစာရဲ့ အရသာဟာ ခွေးတွေက သဘာဝအတိုင်းသိပြီးသားမို့Unconditioned Stimulus (US)။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းလောင်းသံဟာ အခုလို တံတွေးထွက်လာဖို့ အကြောင်းဆက်ပေးတဲ့ လှု့ ဆော်မှုမို့Conditioned Stimulus (CS)။ သဘာဝအတိုင်းအစာမြင်လို့ တံတွေးထွက်ကျတာက Unconditioned Response (UR)။ ဒါပေမယ့် အစာမရှိပါဘဲ….ခေါင်းလောင်းသံကြောင့်တံတွေးထွက်ကျလာတာကကြတော့ အကြောင်းဆက်ပေးပြီးမှဖြစ်လာလို့ Conditioned Response (CR) စသဖြင့် ပညတ်တာ ပေါ့..။
နောက် B.F. Skinner ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်။ Skinner က သူ့ စမ်းသပ်ချက်မှာ ကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ကို လှောင်အိမ်ထဲ ထည့်ထားတယ်..။ ပြီးတော့..လှောင်အိမ်အထဲက ဘားတန်းတစ်ခုကို ကြွက်က နှိပ်မိရင် အစာခွက်ထဲ အစာတစ်တုံးကျလာအောင်လုပ်ပေးထားတယ်..။ ကြွက်ကလေးဟာ ဟိုတိုးဒီတိုးထွက်ပေါက်ရှာရင်းနဲ့ ဘားတန်းကို နှိပ်မိရော…။ ဒီတော့ အစာစားရတာပေါ့..။ ဒီလိုနဲ့ မကြာခဏ ဆိုသလို ဘားတန်းကိုနှိပ်မိ… အစာကျလာ နဲ့ ….ကြာလာတော့…အစာစားချင်ရင် ဘားတန်းကိုနှိပ်ရမယ်ဆိုတာ ကြွက်ကလေးက သိသွားတော့တယ်တဲ့..။
ဒီ Skinner ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်မှာ အစာရယ်၊ ဘားတန်းရယ်၊ လှောင်အိမ်ရယ် ဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးထားလိုက်တာ (built-in)။ Pavlov ရဲ့ ခွေးဟာ ခေါင်းလောင်းတီး (Conditioned Stimulus) ပေးရင် တံထွေးထွက်ကျလာတာဟာ (conditioned response) ဖြစ်သလိုပဲ… ကြွက်ကလေးကိုယ်တိုင်က အစာရဖို ဘားတန်းကိုနှိပ်ရတာကလည်း အကြောင်းဆက်တုန့် ပြန်မှု…(conditioned response) ပဲ။ ဒီ Conditioned Response ၂ ခုမှာကွာသွားတာက…့ အပေါ်က Pavlov ရဲ့ ခွေးက ( ပြင်ပ လူက) တကူးတက ခေါင်းလောင်းတီး (Conditioned Stimulus) ပေးမှ တံထွေးထွက်ကျတာ ဖြစ်ပေမေယ့် Skinner ကြွက်ဟာ အစာရဖို့ ဘားတန်းနှိပ်တဲ့အပြုအမူ (response) ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရတာ။ ဒါကြောင့်မို့Skinner ရဲ့ သီအိုရီကို “ကိုယ်တိုင်ပြု အကြောင်းဆက်ခြင်း (Operant Conditioning)” လို့ ခွဲခြားခွဲရတယ်..။
ဒီသီအိုရီ ၂ ခုစလုံးမှာ…ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းဆက်တုန့် ပြန်မှုတွေ Conditioned Responses (သို့ ) ပြောင်းလဲသွားတဲ့အပြုအမူ တွေကို သင်ယူခြင်း (learning) လို့ ဆိုကြတာပါပဲ..။ ဘားတန်းကို နှိပ်ရင် အစာရမယ်လို့ကြွက်ကလေးက သိသွားတာဟာ စာကြိုးစားလို့ ဂုဏ်ထူးထွက်ရင် အိုင်ဖုန်းရမယ်လို့ သိတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လေးရဲ့ သင်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ တသဘောတည်းပါပဲ Learning Process..။ နောက်တစ်ချက်က… ဒီလို သင်ယူရရှိခြင်းဆိုတာတွေဟာ အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်း (behavioral change) ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြောင်းဆက်မှုကို တနည်းတဖုံပြင်လိုက်ပြောင်းလိုက်ရင် သင်ယူရရှိထားတာတွေဟာ ပြန်လည်ပျက်ပြယ်သွားတတ်ပြန်ရော..။
အစာမပါဘဲ ခေါင်းလောင်းချည်းတီးနေတာကို ကြုံရဖန်များလာရင် ခွေးတွေ တံတွေးထွက်ကျတာ ရပ်သွားသလို…. ဘားတန်းနှိပ်မိပေမယ့် လည်း အစာတုံးကျမလာတာကိုပဲ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ ရရင် ဘားတန်းနှိပ်တဲ့အပြုအမူပျက်ပြယ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပေါ့..။
ဒီလို စမ်းသပ်ခံ (subject) (အထက်က စမ်းသပ်ချက်တွေမှာ ခွေး နဲ့ ကြွက် ပေါ့) ရဲ့ အပြုအမူကို လိုသလိုပုံသွင်းယူဖို့ ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အကြောင်းဆက်ပေးမှုတွေကို ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာက ဒီ သီအိုရီတွေရဲ့ အနှစ်သာရပဲ…။ အထူးသဖြင့် Skinner ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြုအကြောင်းဆက်ခြင်းသီအိုရီ ဟာ ဒီလို အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းတွေကို ပြုလုပ်ရာမှာ “အားဖြည့်ခြင်း (reinforcement)” “အပစ်ပေးခြင်း (punishment)” နဲ့“ပျက်သုဉ်းခြင်း (extinction) “ စတဲ့ သဘောတရားတွေနဲ့ တင်ပြထားတာပဲ..။
အပြုအမူတစ်ခု ကို ပြုလုပ်တဲ့အကြိမ်အရေအတွက် များပြားလာစေဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့ လှုံ့ ဆော်မှုမှန်သမျှဟာ “အားဖြည့်မှု(reinforcement)” ပဲ..။ အထက်က ကြွက်ကလေးဟာ ဘားတန်းကိုနှိပ်မိတဲ့အခါ နောက်ထပ် ဒီဘားတန်းကိုနှိပ်စေဖို့ အစာတုံးချပေးတာ ကို “အပြုသဘောအားဖြည့်ခြင်း (positive reinforcement)” ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ လှောင်အိမ်ထဲမှာ… ဆူညံပွက်လောရိုက်နေတဲ့ အသံနဲ့ ကြွက်ကလေးကို ခြောက်လှန့် ထားမယ်..ဘားတန်းကိုနှိပ်မိ တဲ့အခါမှ (အစာတုံးကိုချပေးခြင်းလိုပဲ) အသံကို ရပ်ပေး ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီလှုံ့ ဆော်မှုမျိုး ကို အဖျက်သဘော အားဖြည့်မှု (Negative Reinforcement)..။ ၂ မျိုးစလုံးက ဘားတန်းနှိပ်အောင် အားဖြည့်ပေးတာကိုး..။
ဒါရဲ့ တိုက်ရိုက်ဆန့် ကျင်ဘက်က “အပစ်ပေးခြင်း (punishment)” ။ ဘားတန်းကို နှိပ်မိလို့ ဓါတ်လိုက်ခံရတယ်…ဒါမှမဟုတ် အထက်က ကျယ်လောင်တဲ့ခြောက်လှန့် သံက ရပ်မသွားပဲ..ပိုကျယ်လာတယ် ဆိုရင် “အပစ်ပေးခြင်း (punishment)” ပေါ့..။ နောက်နောင် ဒီလိုမျိုးနှိပ်မိဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသွားအောင် ကြွက်ကလေးမကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကို အတင်းအဓမ္မလုပ်တာမျိုးကိုး။ နောက်တစ်ခုက “ပျက်သုဉ်းခြင်း (extinction)” ဆိုတာ သင်ယူပြီးသား အပြုအမူ ပြန်လည်ပျက်ဆီးသွားတာ..။ ဘားတန်းကိုနှိပ်မိသော်ငြား…အစာချမပေးပဲ ဒီအတိုင်းပစ်ထားလိုက်ရင် ကြွက်ကလေးဟာ အဆုံးမှာ အစာရဖို့ အရေး ဘားတန်းကိုမနှိပ်တော့တာမျိုးပေါ့..။
တကယ်က…ဒီ အပြုအမူသီအိုရီ (Behavioral Theories) တွေဟာ လူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်အားလုံးမှာ မရှိမဖြစ်အရေးပါသလောက် လက်တွေ အသုံးချနေတာကိုတွေ့ ရမှာပဲ…..။ ဥပမာ- ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုပြင်ဆုံးမရာမှာ…။ ဆိုပါစို့ ..စာမကျိုးစားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီလို စာမလုပ်ပဲ အလေလိုက်နေတာကိုချီးမွန်းလိုက်ရင် (positive reinforcement) ဒီကလေးဟာ နောက်ထပ် အလေလိုက်နေဦးမှာပဲ..။ ဒါပေမယ့်….စိတ်ကောင်းလေးဝင်လာလို့ ဒီကလေးဟာ စာကြည့်ဖို့ လုပ်လာရင်…”စာတစ်နာရီကြည့်ရင် အပြင်ထွက်ခွင့်တစ်နာရီပေးမယ်” စသဖြင့် သူ့ အပေါ်တင်းကျပ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို တထစ်ခြင်းဖြေလျော့ပေးတာမျိုး (negative reinforcement) လုပ်ရင် ဒီကလေးဟာ နောက်နောင်မှာ စာကြည့်ဖို့ အလားအလာ များလာတယ်..။ အချို့ မိဘတွေ.ကတော့…”အပစ်ပေးခြင်း (punishment)” ကိုသုံးကြတယ်…ဥပမာ- ကလေးကို အော်ဟစ်ငေါက်ငမ်းတာ၊ ရိုက်နှက်ပစ်တာမျိုး၊ အပြင်ထွက်လည်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာမျိုး ပေါ့..။
ဒီနေရာမှာ punishment နဲ့negative reinforcement ကွဲဖို့ လိုတယ်..။ punishment ဆိုတာ နှစ်သက်စရာမရှိတဲ့ အရာကိုပေးတာ ဥပမာ-ရိုက်နှက်တာ (သို့ ) နှစ်သက်စရာကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာ ဥပမာ- အပြင်ထွက်လည်ခွင့်ပိတ်လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့်..Negative Reinforcement ကကြတော့ နှစ်သက်စရာမရှိတဲ့အရာကို ဖယ်ရှားပေးတာ ဥပမာ- အပြင်ထွက်လည်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ဖြေလျော့ပေးတာမျိး။ လေ့လာတွေ့ ရှိချက်တွေအရတော့ Punishment ထက် Negative Reinforcement နည်းက ကလေးအတွက် အကျိုးပိုများစေတယ်ဆိုကြတာပဲ..။ အခြားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုတွေကိုပါကြည့်ရတာကိုး..။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်က punishment ပေးတာဖြစ်ပေမယ့် လက်ခံသူက positive reinforcement ဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်…။ ဥပမာ အချို့ ကလေးတွေဟာ အများရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုခံချင်တဲ့အတွက် တမင်တကာ ဆိုးသွမ်းတဲ့အပြုအမူတွေလုပ်ကြတယ်..(သင်္ကြန်မှာကဲကြတဲ့ လူငယ်တွေလို ပေါ့)..။ ဒီအခါမှာ- ဆရာမက သူ တို့ ကို အတန်းရှေ့ ခေါ်ထုတ် အပစ်ပေးရင်..ဒါဟာ သူတို့ အကြိုက်ဖြစ်နေတာမို့ နောက်နောင် ဒီလို မဟုတ်တရုပ်အပြုအမူမျိုးကို ပိုပိုပြီးလုပ်လာတာကို တွေ့ ရတတ်ပြန်တယ်..။ အတန်းထဲက သောက်ရေးအိုးကို ခွဲတဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဆရာမဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက် ခွဲမြဲခွဲမြဲ ဆိုးမြဲဆိုးမြဲပဲဖြစ်တာ ကိုယ်တွေ့ ပဲ..။ ဒီနေရာမှာ ဗီဇ ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်း မေ့လို့ မဖြစ်ဘူးပေါ့လေ..။
ဆရာဦးအောင်သင်း ပြောဖူးတဲ့…”ကောင်မလေးတွေ..နင်တို့ ..ဆေးသမားကောင်လေးတွေကို မကြိုက်ကြနဲ့ …အဲဒါဆို ဒီကောင်တွေ ဆေးသုံးမှာမဟုတ်ဘူး ” ဆိုတာ ဒါပဲ..။ လူဆိုတာ အ၀ိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးတတ်တော့ အကောင်းကိုမကောင်းထင်၊ မကောင်းကိုအကောင်းထင်တတ်ကြတာကိုး…။
လူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ စီမံခန့် ခွဲမှုနယ်ပယ်မှာတော့ ဒီသဘောတရားတွေက ထင်ရှားသပေါ့လေ…။ ဆုပေး၊ဒဏ်ပေး စံနစ် Reward & Punishment ဆိုတာ ဒါတွေပါဘဲ..။ တလောကပဲ ဆရာအော်ပီကျယ်ဆွဲထားတဲ့ ရေခဲရေဖျန်းခံရတဲ့မျောက်တွေနဲ့ ငှက်ပျောဖီး ဇတ်လမ်း Wet Monkey Experiment ကာတွန်းဆိုတာလည်း ဒါပဲ..။ ငှက်ပျောဖီးကို တက်ယူတဲ့ မျောက်ကို ဘာမှမလုပ်ဘဲ အောက်က ကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကို ရေခဲရေနဲ့ ဖျန်းခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အကြောင်းဆက်ပေးလိုက်တာ Conditioned ပဲ။ ငှက်ပျောသီးကို မျောက်တစ်ကောင်က တက်ယူတိုင်း ကျန်တဲ့ကောင်တွေကို ရေခဲရေနဲ့ ဖျန်းတဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ဒီကောင်တွေအပေါ်ကို punishment ပေးတာပဲ။ (နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ကျောင်းသားကို မမိတာနဲ့ထောက်လှမ်းရေးက ကျန်ခဲ့တဲ့သူ့ မိသားစုတွေကို နှိပ်စက်သလိုပေါ့..။) ဒီအခါမှာ ရေခဲရေနဲ့ ဖျန်းခံရတဲ့ကောင်တွေက ငှက်ပျောသီးတက်ယူတဲ့ကောင်ကို မဆီမဆိုင် ၀ိုင်းဆော်ကြနှက်ကြတယ်..။ ဒီအခါကြမှ… ရေခဲရေနဲ့ ဖျန်းတာကို ရပ်ပစ်တာက Negative Reinforcement….။ (နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူကို အရပ်က ၀ိုင်းကျဉ်လာအောင် စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေ ဖိအားပေးသလိုမျိုး)။
ဒီလိုနဲ လှောင်အိမ်ထဲကို နောက်မှ ၀င်လာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်မျောက်တွေကလည်း (ရေခဲရေနဲ့ အဖျန်းမခံရဦးတော)့… ငှက်ပျောသီး တက်ယူတဲ့ကောင်ကို ဘုမသိဘမသိ ဆော်ကြနှက်ကြ။ အဆုံးမတော့ ဒီမျောက်တွေဟာ… နောက်ဆုံးရလဒ်အဖြစ် ”ငှက်ပျောသီးနဲ့ ဆော်ပလော်တီးခံရခြင်း” ဆိုတဲ့ အသိကို ဆက်စပ် သင်ယူရရှိသွားတော့တာပဲ (behavioral change)...(ဖက်ဒရယ် စကားလုံးကြားယုံနဲ့ထောင်ရယ်၊ ရေကြည်အိုင်ရယ်ကို တွဲမြင်သွားကြသလိုမျိုး)။
ဒါကတော့ အခြားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု နဲ့brain wash လုပ်တဲ့နည်းတွေလို စိတ်ပညာသဘောတရားတွေကို တလွဲအသုံးချတတ်ကြတဲ့ ဥပမာပေါ့..။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီ အပြုအမူဆိုင်ရာ သီအိုရီတွေဟာ အခြားသော လူမှုရေးနယ်ပယ်အားလုံးမှာ မသိမဖြစ်ကို အရေးပါနေတယ်ဆိုတာကို သတိပြုဖို့ ပါ..။ မိမိဘ၀ သာယာပျော်ရွှင်ဖို့ မှာ ဒီစိတ်ပညာသဘောတရားတွေကို သိမြင်ထားခြင်းဟာ အသုံးတည့်လှတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ reinforcers, punishment, extinction တွေက အနမတဂ္ဂ ရှိနေတာလည်းမမေ့နဲ့ ပေါ့ ။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာပါမောက္ခ ဆရာကြီးတစ်ယောက် သူ့ မိန်းမကို ခပ်နောက်နောက်ပြောသလိုပေါ့…"ဟ..မိန်းမရ…ဆေးလိပ်တိုတွေ အနှံ့ချထားတာက reinforcement အတွက်ကွ” တဲ့..။ အနီးဆုံးဥပမာကတော့ ဖွဘုတ်ပေါ်က "Like""Share""Block""Comment"တွေပေါ့...
လူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းခြင်းရာမှန်သမျှမှာ စိတ်ပညာဟာ အခြေခံကျကျ ပါနေတယ်ဆိုတာကို နားလည်စေဖို့ ပါ။ ” စိတ်ပညာ (psychology) ကို ယူရင် ဂေါက်နေတယ်ပြောခံရမှာကြောက်လို “့ဆိုတဲ့ ညီငယ်တစ်ယောက် အတွက်…
04/19/14--09:49: ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးရဲ့ အတွေးစများ
ကျနော်တို့နိုင်ငံအကြောင်း သူများနိုင်ငံရောက်ဖူးမှပြန်စဉ်းစားမိတော့။ တခုခုတော့မှားနေတာ သေချာပြီဆိုတာပါပဲဗျာ။ ဘာလို့လည်းဆို ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ သူများနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့အရာအားလုံးလည်း ရှိတယ်ဗျာ၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာလည်း သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဈေးကြီးတန်ဘိုးကြီးတွေ ချည်းပဲဗျာ။
ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့က အဲဒါတွေကိုပိုလျံလို့လွှင့်ပစ်နေရသေးတယ် ဟုတ်လား၊ နောက်တခုက ကျနော်တို့မှာအလုပ်အကိုင်တွေကလည်းပေါမှပေါဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ရတဲ့ငွေကနဲနဲလေးဖြစ်နေပြန်ရောဗျာ့။ အဲတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းကလေးကစ၊ သက်ကြိးရွယ်အိုပါမကျန်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြတာဗျာ။ ဟိုဌါနဒီဌါနဆိုတာ မပြောပါနဲ့ဗျာ၊ အားလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရုံးကန်နေကြတာတော့ အတူတူပါပဲ၊ စစ်တပ်ထဲဝင်တယ်ဆိုတာတော့ အသက်နဲ့ရင်းရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေါ့ဗျာ၊
အဲလိုိပဲဟိုတုံးက မိန်းမမီးနေ၊ယောင်္ကျားဖေါင်စီးဆိုတာလည်း အသက်ဘေးနဲ့ရင်းရတဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာ၊ ထားပါတော့၊ ကျနော်ဟိုးကျောင်းကထွက်ပြိးကာစ အလုပ်ထဲဝင်တော့ ၃ကျပ်၁၅ပြားကစရတာ၊ နောက်ပိုင်းတော့ လခ၂၀၀လောက်ရတယ်၊ ဘယ်လောက်မှာလဲဗျာ၊ အဲမှာသတိထားမိလာတယ်၊ ကိုယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး၊ အကျင့်ကပျက်လာတော့တာပဲ၊ အဲမှာရုံးစည်းကမ်းရှိတယ်လေ၊ နံနက်၉နာရီရုံးတက် ညနေ၃နာရီခွဲရုံးဆင်းပေါ့ဗျာ၊ အဲမှာရုံးအုပ်ကြီးကိုပြောတယ်၊ အစိုးရဌါနအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုကြည့်ရတာ တခုခုမှမခိုးရင် ဘယ်လိုမှဒီအလုပ်မလုပ်နိုင်ကြဘူးလို့၊ ငွေကြေးကိုင်သုံးခွင့်ရတဲ့ဝန်ထမ်းကငွေခိုးတယ်၊ ပစ္စည်းကိုင်သုံးခွင့်ရတဲ့ဝန်ထမ်းက ပစ္စည်းခိုးတယ်၊ အဲမှာကျနော်တော့ဘာမှကိုင်သုံးခွင့် မရတော့ကျနော်အချိန်ခိုးရမှာပဲလို့ပြောပြီး အချိန်ခိုးတယ်အိမ်အလုပ်လုပ်တယ်။
အဲဒါလိုတွေဖြစ်နေတာဗျာ့၊ အခုသူများနိုင်ငံတွေရောက်တော့ သူတို့အစိုးရကစီစဉ်ပေးထားတာဗျာ၊ပြောရင်ယုံနိုင်စရာတောင်မရှိဘူး။ လူဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုလို့တာဝန်ယူ ထားတာ၊ နောက်တခုက နိုင်ငံပေါ့၊ နိုင်ငံတခုမှာပြည်သူတွေ အတူနေကြတာ ဒီနိုင်ငံနဲ့ပါတ်သက်တာ၊ ဒီနိုင်ငံကထွက်တာ အကုန်လုံး ဒီနိုင်ငံမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းသက်ဆိုင်စေရမယ်ဆိုတာ အစိုးရတွေကော၊ ပြည်သူတွေကော သပ်မှတ်လက်ခံထားကြတာဗျာ။
အဲတော့လူတိုင်းလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရအောင် သင်ပေးထားတယ်၊ အလုပ်လည်းလုပ်ကြရတယ်၊ အလုပ်လုပ်ပြီးသပ်မှတ်တဲ့အခွန်လည်းထမ်းဆောင်ကြရတယ်၊ ရတဲ့အခွန်နဲ့အစိုးရကပြန်စီစဉ်တာကလေးဆို ကလေးအခွင့်ရေး၊ကျောင်းသားဆိုကျောင်းသားအခွင့်ရေး၊ အလုပ်သမားဆို အလုပ်သမားအခွင့်ရေး၊ ပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့ပင်စင်ငွေ၊ ပင်စင်ငွေက၂မျိုးးတောင်ရတာ၊ အသက်ကြီးလို့ရတဲ့ပင်စင်၊ အလုပ်လုပ်ထားလို့ရတဲ့ပင်စင်၊ အလုပ်မလုပ်ထားရင်တောင် ကျမ္မာရေးမကောင်းရင် ဆေးပင်စင်၊ အသက်တွေတအားကြီးလာရင်လည်း ဘိုးဘွါးရိပ်သာ အဲလိုမျိုး လူတဦးချင်းစီမှာလူလိုနေရထိုင်ရ၊ လူဂုဏ်သိက္ခာနဲ့နေရတာ တော်တော့်ကို တန်ဘိုးရှိတဲ့အရာပဲဗျာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကျတော့လည်း လူတွေရုံးကန်ရလှုပ်ရှားနေလိုက်ရတာ၊ အသက်ကြီးလို့အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်၊ သားသမီးတွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်၊ တောင်းစားဘို့သာပြင်ဆင်ဘို့ရှိတော့တာပဲဗျာ။
အခုဟာ နိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးတကယ်ပြောင်းမပြောင်းကျနော်တို့မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူးဗျာ၊ အဲလောက်လည်း အများကြီးထည့်မစဉ်းစားဖြစ်ဘူးထားပါတော့၊ ဒါပေမဲ့ဘယ်အစိုးရဘယ်စနစ်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာ၊ အထက်မှာကျနော်ပြောခဲ့သလို ဒီနိုင်ငံနယ်နမိတ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်ရေးကိုတော့ ပြောဆိုရမှာပေါ့ဗျာ၊ တောင်းဆိုရမှာပေါ့၊ တချို့ဟာတွေလည်း အကြံဥာဏ်ပေးရမှာပေါ့ဗျာ။ ဆိုလိုတာက အခုစင်္ကာပူဆိုတာ ဘယ်နားကမှဒီမိုကရေစီစနစ်မကျင့်သုံးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့အစိုး၇က လူလိုစဉ်းစားပြီး လူတွေကိုလူလိုကျင့်သုံးတော့သူ့နိုင်ငံသားကော အလုပ်လာလုပ်ကြတဲ့သူတွေကော လူလိုနေထိုင်ရတာပဲ၊ အနဲဆုံးတော့အဲလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ လူတွေနေထိုင်လို့ရမဲ့စနစ်တွေကို အစိုးရကရေးဆွဲ၊လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားတာပဲလေ။ အဲမှာပဲကြည့်လို့ရတာပေါ့။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ ကျောင်းတက်နေသူတွေ၊ လက်လုပ်လက်စားတွေ အမျိုးမျိုးလည်းရှိကြတာပဲ။ ဒါကဘာနိုင်ငံရေးမှထည့်မစဉ်းစားသေးပဲနဲ့ သာမန်အရပ်သားအတွေးနဲ့တွေးပြီး ကြည့်ရုံနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာတွေပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ တိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေမှာလေ့လာရင်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆို အဲဒါမှသူများလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု လူနေမှုစနစ်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ နောက်တခုက သူတို့လည်းအရင်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ရတာပါပဲ၊ အခုထိသင်ကြားလေ့ကျင့်နေရတုံးပါပဲ၊ပြောစရာတွေတော့အများကြီးပဲဗျာ၊ သူတို့မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတာ ကစ ပြောရင်၊ အဲဒီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နဲ့ လူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကို အင်တာနက်မှာတင်ထား လိုက်တာ၊ အဲဒီမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့အကြောင်းဌါနတိုင်းကကြည့်လို့ရတာပေါ့၊ သူတခုခုညာလို့မရတော့ဘူး၊ သူတို့ကလူတယောက်ယောက်နာမည်ပျက်စာရင်းရှိရင်၊ အလုပ်အကိုင်ခက်တာတို့ ဘာတို့ဖြစ်သွားတာ၊ အဲဒါကိုလူတွေကအဖြစ်မခံကြဘူးပေါ့ဗျာ၊ နောက်တခုက အစိုးရပိုင်းကအကုန် တာဝန်ယူပေးထားတာလည်းရှိတယ်၊ နောက်တခုက သူတို့ကလေးတွေ ဘ၀ထဲကစလေ့ကျင့်ပေးတာဗျာ၊ အဲဒါတွေကကလေးတွေစိတ်ဓါတ်ကို တကယ်ပြုပြင် သွားတာ။ တော်တော်အံ့သြဘို့ကောင်းတာ။
အဲလိုအခြေအနေတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲတော့ခြုံပြောချင်တာက ကိုယ့်နိုင်ငံကအစိုးရများ၊ ပညာရှင်များ၊နိုင်ငံရေးပါတီမှာ၊ နိုင်ငံရေးသမားများအနေနဲ့သူများနိုင်ငံကိုလာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ တမင်လေ့လာရေးလာရင်လဲ အနဲဆုံး၆လလောက်နေပြီးလေ့လာစေချင်တယ်ဗျာ။ အရင်ကကျနော်တို့လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံထဲနေပြီး ကိုယ့်အသိလေး ရှိတဲ့ဗဟုသုတလေး၊ စာအုပ်ထဲဖတ်ဖူးတာလေးနဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်ဖူး တယ်ဗျာ။ အခုသူများနိုင်ငံကိုရောက်လို့ သတိထားမိတဲ့အခါမှာတော့ တော်တော်လေးကွဲလွဲတာတွေ သိလာရလို့ပါ။
04/19/14--09:59: Social Vulnerability
ဒီခေါင်းစဉ်ကို ၂ ပိုင်းခွဲရရင် ပထမစကားလုံး “social” ဆိုတာ “လူနဲ့ ပတ်သက်သော” ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် “vulnerability” ဆိုတဲ့စကားကြတော့ မြန်မာစကားတစ်ခွန်းထဲနဲ့ ခြုံငုံမိအောင်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဖို့ခက်တယ်ထင်မိတယ်။ vulnerability ရဲ့ မူရင်း လက်တင်စကားလုံး “vulnerare” က “ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ (to be wounded)” ဆိုတော့ “ထိခိုက်ပျက်ဆီးလွယ်မူ”လို့ ပြန်ရင်သင့်မလားပဲ။ ဒီတော့ “Social Vulnerability” ဆိုတာ “လူမှုရေးထိခိုပျက်ဆီးလွယ်မှု “ လို့ ဘာသာပြန်လိုက်ရင် ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။
ထိခိုက်ပျက်ဆီးလွယ်မှု Vulnerability ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ ကိုယ်တိုင်က အင်မတန်ကျယ်ဝန်းလွန်းလို့ ပါရဂူ ကျမ်းအစောင်စောင် ပြုစုရတဲ့ ဘာသာရပ်ပဲ။ ဒါကိုပဲ…. လူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ social စကားလုံးနဲ့ ထပ်ပြီးချဲ့ လိုက်တော့ ဒီ အကြောင်းအရာ social vulnerability ဆိုတာ မဂ်တရား၊ဖိုလ်တရားလို ကျယ်ဝန်းတဲ့ ပညာရပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာပဲ…။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီအကြောင်းအရာကြီးကို ပြောဆိုတာဟာ “ဆင်ခေါင်းခွေးမချီနိုင်” ပေါ့လေ..။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်…နာဂစ် နှစ်ပတ်လည် နီးလာတာ၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ ပဋ္ဋိပက္ခတွေရယ်၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ နဲ့အဝေးပြေးကားမီးလောင်လို့ ခရီးသည်တွေသေကြေရတာ၊ မလေးလေယဉ်ပျက်ကျတာ၊ ကိုရီးယားသဘောင်္နစ်မြုပ်လို့ ကလေးတွေသေရတာ စတဲ့ သတင်းတွေကိုဖတ်မိတော့ ဒီ social vulnerability ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာက ခေါင်းထဲရောက်လာတာပဲ..။
ဒီ အကြောင်းအရာဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့် ခွဲမှု (disaster management) နယ်ပယ်က ဖြစ်တဲ့အတွက် အရင်ဦးဆုံး ဘေးအန္တရာယ် (disaster) ဆိုတာဘာလဲ နားလည်ဖို့ လိုလာတယ်။ အလွယ်ကူဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုကတော့ ဘေးအန္တရယ်ဆိုတာ ရပ်ရွာ (community) က ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်သွားတဲ့… ရပ်ရွာရဲ့ လူမှုစီးပွားအခြေအနေကို ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်တဲ့… ရန်စွယ်တစ်ခု (သို့ ) Shock တစ်ခုပေါ့။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာစကားနဲ့ ပြောရရင် “ထိခုက်ပျက်ဆီးလွယ်မှု (vulnerability)” နဲ့“ရန်စွယ် (hazard)” တွေ့ ဆုံတဲ့အခါ “ ဘေးအန္တရာယ် (disaster) “ ကျရောက်လာတယ်ပေါ့..။ Hazard x Vulnerability = Disaster ပေါ့။
ဒီနေရာမှာ မြန်မာစကား ဘေးအန္တရာယ် (disaster) နဲ့ ရန်စွယ် (hazard) ကို ကွဲဖို့ လိုတယ်…။ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကို မထိခိုက်သေးသမျှ့ ရန်စွယ် (hazard) အဆင့်ပဲရှိတယ်..။ အဲ…ထိခိုက်လာပြီဆိုရင် (ဥပမာ- လူတွေသေကုန်တာ၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ ဆုံးရှုံးကုန်တာ..စသဖြင့်) ဘေးအန္တရာယ် (disaster) ဖြစ်လာတော့တာပဲ..။ ဒါ့ကြောင့် လူသူမရှိတဲ့ တောကြီးတောင်ကြီးထဲမှာ ငလျင်လှုပ်တာဟာ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကို မထိခိုက်သမျှ “ရန်စွယ် (hazard)” ပဲ “ဘေးအန္တရာယ်(disaster)” မဟုတ်ဘူးပေါ့။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဟာ သူ့ ဟာသူ ပင်လယ်ထဲမှာ လေဖိအားအတက်အကျတွေနဲ့ ရှိနေစဉ်မှာ ရန်စွယ်(hazard) ဖြစ်ပေမယ့် ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာ ဘေးအန္တရာယ် (disaster) ဖြစ်လာတော့တာပဲ။
ဒီနေရာမှာ ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို မူတည်ပြီးတော့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကို အမျိုးအစားခွဲတာက ၁) သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် natural disaster ဥပမာ- နာဂစ်၊ဆားစ်ရောဂါ၊ ချင်းပြည်နယ်မှာကြွက်တွေဖျက်တာ စသဖြင့်.. ၂) လူလုပ်ဘေးအန္တရာယ် man-made disaster ဥပမာ- ကချင်ပြည်နယ်က လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ၊ ရခိုင်က အဓိကရုဏ်းတွေ စသဖြင့်။ ဒါကြောင့်ပဲ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်မှာ ဘေးအန္တရာယ် (disaster) အဆင့်ကို တက်လာမယ့် ဘေးရန်တွေ (hazard) ဟာ သဘာဝအလျောက်ရော၊ လူ့ ပယောဂ ကြောင့်ရော မျိုးစုံရှိနေနိုင်တာကို သတိပြုဖို့ လိုတယ်။ ဘုရားဟောတဲ့ “အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ” ဆိုတဲ့ လက္ခဏာရေးသုံးပါးကိုနှလုံးသွင်းစရာပေါ့...။
ဒီနေရာမှာ လူတော်တော်များက မြန်မာနိုင်ငံဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နည်းတဲ့နိုင်ငံလို့ တလွဲ ထင်မြင်ကြတာကို သတိပြုဖို့ ။ တကယ်က ရာသီဥတုမျိုးစုံ၊ ပထ၀ီဝင်အနေအထားမျိုးစုံ၊ ကမ်းရိုးတန်းသုံးဆစ်ချိုးနဲ့ ဆိုတော့ သဘာဝရန်စွယ်တွေ (natural hazard) တွေကလည်း များလှသောင်းသောင်းပါပဲ။ ဒီအထဲမှာမှ လူမျိုးစုံ၊ဘာသာစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ ရှိနေတာ့ ပဋ္ဋိပက္ခတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လူလုပ် ဘေးအန္တရာယ်တွေပါ ရှိနေတာ မမေ့နဲ့ ပေါ့။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ဘေးအန္တရာယ်အဖြစ်များဆုံးတိုင်းပြည်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေတာပဲ။
ဒါဖြင့်ရင်…သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တာခြင်းအတူတူ အချို့ က ပျက်ဆီးမှုနည်းပြီး အချို့ ကပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုအဆမတန်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လည်းမေးစရာဖြစ်လာတယ်။ ကျရောက်လာတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ ပြင်းအား (intensity) နဲ့ ထိခိုက်ပျက်ဆီးလွယ်မှု (vulnerability) မူတည်ပြီးကွဲပြားသွားကြတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ..။ ဥပမာ- နယူးအော်ရီလန်းပြည်နယ်ကို ၀င်မွှေသွားတဲ့ ကက်ထရီနာ မုန်တိုင်းဟာ နာဂစ်ထက်တောင် ပြင်းအားများတာပဲ။ ဒါပေမယ့် လူအသေအပျာက်က ထောင်ဂဏန်းပဲရှိခဲ့တယ်။ နာဂစ်မှာ လူသိန်းချီသေခဲ့တယ်။ အမေရိကန်က ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှု (economic loss) မှာ မြန်မာလိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံထက် တော့ မြင့်တာပေါ့လေ..။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ဆုံးရှုံးမှုဟာ ကြုံရတာနဲ့ မတန်တဆ ဖြစ်လွန်းတယ် (Disproportionately)။
ဒီနေရာမှာ ထိခိုက်ပျက်ဆီးလွယ်မှု “vulnerability” ဘာလဲ ဘယ်လဲက အရေးကြီးလာတယ်။ ထိခိုက်ပျက်ဆီးလွယ်မှု မြင့်လေလေ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများလေလေကိုး…။ vulnerability အမျိုးအစားတွေထဲကမှ social vulnerability လူမှုရေးထိခိုက်လွယ်မှု ဆိုတာက လူနဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကို မူတည်ပြီးစဉ်းစားတာ။ ဒါကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာ တကယ်က သဘာဝအလျောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ”Natural disasters are not natural” ဆိုကြတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာ လူမှုရေးတည်ဆောက်ချက် social construct ပါပေါ့..။ တနည်းအားဖြင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအကြောင်းကို လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပဲစဉ်းစားရမယ်လို့ ဆိုလိုက်တာပဲ။ လူ မှုစီးပွား (socio-economic welbeings) ကို မထိခိုက်သေးသရွေ့ဘေးအန္တရာယ် လို့ မှမသတ်မှတ်နိုင်တာကိုး…။
ဒီလို လူမှုရေးထိခိုက်ပျက်ဆီးလွယ်မှု (Social Vulnerability) ကို ဖွင့်ဆိုရှင်းပြဖို့ အားထားကြတာတွေထဲမှာ ထင်ရှားတာတွေုက ၁) Risk-Hazard (RH) Model နဲ့ 2) Pressure and Release (PAR) Model ပဲ။
RH model အရ ဘေးရန် (hazard) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ထိခိုက်မှု (impact) ဆိုတာ ဒီဘေးရန်ကိုထိတွေ့ ပတ်သက်နေနေမှု (exposure) နဲ့ တုံ့ ပြန်နိုင်စွမ်း (sensitivity) တို့ ရဲ့ ထုတ်လုပ်ချက်ပါတဲ့။ (Hazard==> Exposure X Sensitivity ==>Impact )။ ဥပမာဆောင်ရရင် - နယူးအော်ရီလန်း နဲ့ လပွတ္တာပေါ့။ ဒီမြို့ နှစ်ခုစလုံးဟာ ပင်လယ်နဲ့ ကပ်နေတဲ့မြို့ တွေ။ မြေနိမ့်ဒေသ (low land areas) တွေမှာရှိနေတဲ့မြို့ တွေ။ ဒါကြောင့် မုန်တိုင်းနဲ့ နပမ်းလုံးရဖို့“exposure” များတဲ့မျြိ့ တွေပဲ။ ဒါပေမယ့် မုန်တိုင်းဝင်လာရင် (မုန်တိုင်းပြင်းအား အတူတူဖြစ်စေဦး) နယူးအော်ရီလန်းဟာ “တုန့် ပြန်ကာကွယ်နိုင်စွမ်း (sensitivity)” ပိုမြင့်တော့ “ထိခိုက်မှု (impact)” မှာ လပွတ္တာထက် ပိုနည်းပါး သက်သာသွားတယ်လို့ ဆိုလိုတာပဲ။ ဒီ model မှာ “Vulnerability ထိခိုက်လွယ်မှု” ဆိုတာဟာ “ဘေးရန် (hazard)” မှအပ ကျန်တဲ့အကြောင်းအချက်သုံးခု “exposure, sensitivity and impact” တို့ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုရင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရလဒ်လို့ ဆိုလိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း “exposure, sensitivity and impact” ဆိုတဲ့ ပညတ်တွေ ကို ဒီမော်ဒယ်က အကြမ်းဖျဉ်းပဲရှင်းပြထားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ ရမယ်။
ဒါကြောင့် ဒီအားနည်းချက်ကို ကျော်လွှားဖို့Pressure and Release (PAR) Model နဲ့လူမှုရေးထိခိုက်လွယ်မှုကို ရှင်းပြဖို့ အားထုတ်လာကြတယ်။ ဒီ PAR မော်ဒယ်အရ ဘေးအန္တရာယ် (disaster) ဆိုတာဟာ “လူမှုစီးပွားဖိအားတွေ (socio-economic pressure)” ရယ် “ဘေးရန်နဲ့ ရုပ်ပိုင်းထိတွေ့ ပတ်သက်မှု” (physical exposure) တို့ ရယ်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ပေါ့။ တအားဖိထား (pressure) ရာကနေ လွှတ်ပေး (release) လိုက်တော့ ပေါက်ကွဲထွက်လာတယ် (disaster) ဆိုတဲ့သဘောမျိုး။ [[လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းလိုပေါ့..ဤကား စကားချပ်]] :D။
အသေးစိတ်ရရင်တော့ လူမှုစီးပွားဖိအားတွေဆိုရာမှာ ၁) ရင်းမြစ် အကြောင်းတရားတွေ root causes ရယ် ၂) ဖိအားအဟုန်တွေ dynamic pressure ရယ် ၃) လုံခြုံမှုကင်းမဲ့တဲ့ အခြေအနေများ unsafety conditions ဆိုပြီး ခွဲခြားပြတယ်..။
ရင်းမြစ်အကြောင်းများ root causes ဆိုရာမှာ အဓိကအားဖြင့် စီးပွားရေဆိုင်ရာ (economic) ၊ လူဦးရေဆိုင်ရာ (demographic) နဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ (political) ဖြစ်စဉ်တွေ (process)ကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာလူ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်း ရင်းမြစ်ခွဲဝေသုံးစွဲမှုနဲ့ ဖြန့် ဖြူးမှု (resource allocation and distribution) အပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေတာကိုး။ ဥပမာ- စစ်တွေနဲ့ ရန်ကုန်ဟာ မြို့ တော်ချင်းအတူတူ၊ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ ချင်းအတူတူဖြစ်ပေမယ့် ရန်ကုန်လို နေရာဟာ စီးပွားရေးအရ၊ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအရ ၊ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အရ အစိုးရက ဦးစားပေးလေ့ရှိသမို့ ရန်ကုန်သားတွေအတွက်ပဲ နိုင်ငံရဲ့ ရင်းမြစ်တွေ (ဥပမာ- နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်) ကို ပိုမိုသုံးစွဲတာမျိုး..။ ဒီအခါမှာ ဒီ ၂မြို့ အကြားမှာ ဖွံ့ ဖြိုးရေးမညီမျှမှု (uneven development) ဖြစ်လာပြီး အကျိုးဆက်က အခြေချရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်မှု (migration patterns) တွေဖြစ်လာတော့တာပဲ။ ဒါကို ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ဖိအားအဟုန် (dynamic pressure) လို့ ခေါ်တာပဲ။
ဒါရဲ့ နာက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ မလုံခြုံတဲ့အခြေအနေများ (unsafe conditions) အောက်မှာ နေထိုင်ရခြင်းပေါ့။ ဆိုလိုတာက ရခိုင်ကနေ ရန်ကုန်ကိုတက်လာတဲ့ ရခိုင်အများစုဟာ ဆင်းရဲသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဆင်ခြေဖုံးလိုနေရာတွေမှာနေရမယ်၊လူမျိုး၊ ဘာသာစကားကွဲနေတဲ့အခါမှာ ၀ိုင်းပယ်ခံရမယ် (social exclusion) စသဖြင့် မလုံခြုံမှုတွေကိုကြုံတွေ့ လာရတာကိုဆိုလိုတာပဲ..။ ဒီလို စီးပွားရေးအားဖြင့်၊ နိုင်ငံရေးအားဖြင့်၊ လူမှုရေးအားဖြင့် စသဖြင့်မလုံခြုံမှုတွေ ဖိအားတွေ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာတာကို Social Vulnerability လူမှုရေးထိခိုက်လွယ်မှု လို့ ဒီ PAR မော်ဒယ်ကဖွင့်ဆိုရှင်းပြတာပဲ။
လက်တွေ့ ဥပမာနဲ့ ကြည့်ရရင် နာဂစ်ဒေသက လူတွေပေါ့။ ဒီအေရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ရွာတွေတော်တော်များဟာ အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲတွေအပြီးမှာလွတ်လပ်နေသေးတဲ့ အထက်မြန်မာပြည်က အညာသားတွေ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ အောက်ပြည်ကို ရွေ့ ပြောင်းအခြေချရင်းဖွံ့ ဖြိုးလာတာ။့ အသက်မွေးမှုကိစ္စအ၀၀(livelihood reasons) အတွက် (ဥပမာ- မီးသွေးဖုတ်၊ လယ်ထွင်၊ ပုဇွန်ကန်ဖေါ် စသဖြင့်) နဲ့သဘာဝဘေးရန်အတားအဆီးဖြစ်တဲ့ ဒီရေတောတွေကိုခုတ်ထွင်ကြတယ်။ ဒါ့အပြင်…လူဦးရေးဖိအားကြောင့်ရယ်၊ အသက်မွေးမှုအတွက် ကြောင့်ရယ်…ဒီလူတွေဟာ ပင်လယ်ဘက်ကို တရွေ့ ရွေ့ တိုးလာပြီး မြေနိမ့်ဒေသတွေမှာ အခြေချနေထိုင်လာတာပဲ။ တချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ လွဲမှားတဲ့ ပေါ်လစီတွေ၊ ပြည်တွင်းစစ်တွေ ကြောင့်လည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရဲ့ လူမှုစီးပွားအခြေအနေတွေဟာ ဆိုးသထက်ဆိုးလာခဲ့တယ် ((Economic, Social & Political Process ==>dynamic pressure as migration patterns==> unsafe conditions))။ ဒီလိုလူမှုရေးထိခိုက်လွယ်မှု (social vulnerability) မြင့်နေတဲ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းဟာ သဘာဝဘေးရန် (hazard)နဲ့တွေ့ ကြတဲ့အခါမှာ့ နာဂစ် လို ဘေးအန္တရာယ်ကြီးဖြစ်ပွားလာတော့တာပါပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ ကနေ့ ခေတ်မှာ ထိခိုက်လွယ်မှု vulnerability နဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု poverty ကို အပြန်အလှန်ယိုင်းပင်းနေတဲ့ အမွှာမိစ္ဆာ နှစ်ကောင် twin evils အဖြစ်ရှုမြင်လာကြပြီး ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့် ခွဲရေးနဲ့ (disaster management) ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းတွေ poverty reduction ကို ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လာကြတယ်။ ဖွံ့ ဖြိုးအောင်လည်းလုပ် ဘေးအန္တရယ်လည်းလျော့ချ ဆိုတဲ့ နှစ်လမ်းသွား double track approach ပေါ့။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (climate change) နယ်ပယ်မှာဆိုရင် ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ climate smart ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ဒီသဘောပဲ။ ဒါကို ရပိုင်ခွင့်အခြေပြု ဖွံ့ ဖြိုးရေးလို့မြန်မာလို ပြန်ရင်ရကောင်းမယ့် Rights based approach မှာတော့ လူမှုအကာအကွယ်တွေ Social Protections နဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို လျော့ပါးအောင်လုပ်လာကြတယ်..(climate change adaptation)..။ ဒါကို Adaptive Social Protections ဆိုပြီး လူမှုရေးထိခိုက်လွယ်မှု social vulnerability ကိုလျော့ချတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ကြတာပဲ။
ဒီလို စီမံခန့် ခွဲမှုတွေ ထိရောက်စေဖို့ အချို့ သော ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာဆိုရင် Social Vulnerability Index ဆိုတာကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် တည်ဆောက်ထုတ်ပြန်ထားကြလေ့ရှိတယ်။ သုတေသန တစ်ခုအဆိုအရလည်း ဘေးအန္တရာယ်လျော့ချရေးမှာ ၁ ဒေါ်လာမြှုပ်နှံရင် ဖွံ့ ဖြိုးမှုရန်ပုံငွေ ၄ ဒေါ်လာကို စုဆောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့။ မြန်မာလို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ ဘေးရန်မြေပုံ hazard map ဆိုတာတောင် ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်း အကုန် မပြုစုနိုင်သေးတော့ social vulnerability index ဆိုတာ ဝေးနေသေးတာပါဘဲ..
04/22/14--06:15: အမျိူးအမည် မသိ ဝေဒနာ
ဒီ တစ်ခေါက် သင်္ကြန် တွင်း Over Sea Trip ခရီးစဉ် မှာ မလေးရှားက
Guide က Mr . Peter Tan ဆိုသူ ဖြစ်ပြီး အသက် ၅၈ နှစ် လောက် ရှိပါပြီ
အသက် အရွယ် နဲ့ မမျှ သွက်လက်စွာ စိတ်ပါဝင်စားစွာ
Guide Service အလုပ်ကို တာဝန် ကျေပြွန် ပါတယ်။
မလေးရှား နိုင်ငံ ။ကွာလာလမ်ပူ မြို့ ကို ၀င်တော့ တွေ့ မြင်သမျှ အဆောက်အဦး
တော်တော် များများကို နာမည်။ ထူးခြားမှု တွေ ပြောပြပါတယ်။
တစ်ခုဘဲ ကျမ နင် သွားတာက UN Office ရုံး အဆောက်အဦး နားက ဖြတ်တော့
UN office လို့ လဲ ပြောသလို Myanmar Refugee တွေ
Early Morning ထဲက Q လုပ်နေတာ။
တစ်ခြား ဥရောပ။အမေရိကား နိုင်ငံ တွေကို သွားဖို့ စောင့် နေတာလို့
သူက လွယ်လွယ် ပေါ့ပေါ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျမ အတွက်တော့ သူပြောလိုက်တဲ့ စကားက တော်တော် လေး
မလေးရှား မှာ ဆေးကုရတာ ဆရာဝန်ခ ပေါ ကြောင်း။
အစိုးရက ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက်မှု ကောင်းကြောင်း။
အများပြည်သူ ၀န်ထမ်းတွေ အတွက် အစိုးရ Housing တွေ ရှိကြောင်းလဲ ပြောပြပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ခရီးစဉ် မှာ ကျမ ရ လိုက်တဲ့ အတွေ့ အကြုံ အသစ်
အဆန်း တစ်ခုကို Share ချင်လို့ပါ။
ကျမ က ခရီးသွားလာ နေတဲ့ သူဖြစ်လို့ အိုင်ဖုံး။အိုင်ပက်။
စတာတွေ အတွက် မဖြစ် မနေ လိုအပ်တာက Power Bank ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနှစ်က သင်္ကြန် Over Sea Trip တုံးက စင်္ကာပူ မှာ နေတဲ့
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကPower Bank ( 7500 mAh )
တစ်ခု လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
တော်တော်လေးလဲ အသုံးခံ သလို သုံးနေတာလဲ တစ်နှစ် ပြည့် သွားပါပြီ။
ဒီ တစ်ခေါက်တော့ ကောင်းတာလေးများတွေ့ ရင်
ထပ် ၀ယ် မယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။
မလေးရှားမှာ တည်းတဲ့ နေရာက PUDU Plaza Hotel ပါ။
ဟိုတယ် နဲ့ ဈေးဝယ် စင်တာ Plaza တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ညဘက် ဟိုတယ်ကို ၇ နာရီ ကျော် ကျော် ပြန် ရောက်တာနဲ့
မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက် နေ့ နဲ့ ကြုံ ကြိုက်လို့
ပလာဇာ အောက်ဘက် ဆင်းပြီး ခေါင်းလျှော် ရည် ဆိုင် ရှာ
တွေ့ လို့ ခေါင်းဝင်လျှော်တာ ခေါင်းလျှော် ရည် ဆိုင် မှာ
အလုပ်လုပ် နေတဲ့ ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီး လေးတွေက မြန်မာတိုင်းရင်းသူ
ချင်းမ လေးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ဗမာ စကားသံလေး တစ်ဝဲ၀ဲ နဲ့ပါ။
ခေါင်း တစ်ခါလျှော် နှိပ် လုပ်ပေးတာ ရင်းဂစ် ၁၅ ဘဲ ပေးရပါတယ်။
တန်တယ်လို့ဘဲ ပြော နိုင်ပါတယ်။
မလေးရှား ဟိုတယ် တွေ အားလုံးက Three pins အပေါက် တွေ ဆိုတော့
ဖုံးအားသွင်းဖို့ အတွက် မေ့လာတာနဲ့ အသစ် ၀ယ်ချင်လို့
ခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ ပလာဇာ ထဲ ပတ် လျှောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုံးအပို ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကို ရောက်ပါတယ်။
power bank တွေလဲ တွေ့ မိသလို
မီးပလပ်အားသွင်းခေါင်းတွေလဲ တွေ့ တော့ ၀င်ပြီး ဈေးမေး ပါတယ်။
ဆိုင် အရောင်းကောင်တာက ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို How much
ဘာညာ ပြောရင်းကမြန်မာလူမျိုး မှန်းသိသွားရင်း ကိုယ်ကတော့
၀မ်းပန်း တစ်သာ နဲ့ ဈေးဝယ် မယ်လို့လဲ စိတ်ကူး မိလိုက်ပါတယ်။
( စကားမစပ်-- ကျမ က ဈေးဝယ်ရင် အများအားဖြင့် ပစ္စည်းမှာ
Prize ကပ်ထားတဲ့ ဆိုင်မျိုး။
ပုံသေ ဈေးနှုန်း သတ်မှတ် ထားတဲ့ ဆိုင် မျိုးကို ပိုသဘောကျပါတယ်။
ဟိုလို ဒီလို လျှောက် ဈေးဆစ်။ ပြန်လှည့်ထွက်။ပြန် ဆစ် ။
အာခြောက်အောင် လုပ်ရတာ မျိုး သြိပ် သဘောမတွေ့ မိပါဘူး။ )
သူ့ ဆိုင် မှာ power bank ( Samsung ) အမျိုးအစား နှစ်ခု ကို တွေ့ ပါတယ်။
( 9000 mAh ) ( 13000 mAh ) ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမက ဈေးမေး စုံစမ်းတော့ 9000 mAh ကို 279 RM( ၂၇၉ ရင်းဂစ် ) လို့ ပြောပါတယ်။
Samsung Catalogue စာအုပ်ကို ထုတ်ပြသလို
စာအုပ်ထဲက ဈေးနှုန်းက 9000 mAh ကို
( 279 R ) လို့ ရေးထားတာ မြင်ပါတယ်။
ကျမက Power Bank လိုချင်တာထက် လောလောဆယ် လိုချင်နေတာက
Three pins ခေါင်း ဆိုတော့ three pins ခေါင်း ရှိမရှိ အရင် မေးပါတယ်။
ကျမကို ရှိတယ်။ ၂၀ ရင်းဂစ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ရောင်းဖို့ မရှိဘူး။
ဆိုင် သုံးဖို့ဘဲ ရှိတယ်။ရောင်းမရောင်းကို ဆိုင် ပိုင်ရှင်ကို
သွားမေးဦးမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြောပြော ဆိုဆို တစ်ဘက်ခြမ်းက နှစ်ဆိုင် ကျော်ကို ထွက်သွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ စောင့် နေရင်းက ကျမလဲ မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်း ဆိုင်အတူတူ။
ကောင်တာ အခွဲ မှာ ထိုင် နေတဲ့ Chinese မျက်နှာပေါက် နဲ့
လူ တစ်ယောက် ကို သူထိုင် နေတဲ့ ကောင်တာထဲက
Samsung Power Bank ကို မြင်တော့ ဈေးထပ်မေးပါတယ်။
9000 mAh ကို ၁၃၀ ရင်းဂစ်။ 13000 mAh ကို ၁၆၀ ရင်းဂစ် ဆိုလား။
၁၉၀ ရင်းဂစ် ဆိုလား ။ဈေးပြောပါတယ်။
ဟမ်-- ကျမ နည်းနည်း ကြောင် သွားမိပါတယ်။
တစ်ဆိုင်ထဲ အတူတူ ကိုယ့် မြန်မာ လူမျိုးက ကတ်တစ်လောက် ထုတ်ပြပြီး
ဆမ်ဆောင်း 9000 mAh ကို ( 279 R ) လို့ ဈေးပြောပြီး။
တရုတ်က ၁၃၀ ရင်းဂစ် ဆိုတော့ နည်းနည်း နင် သွား မိပြန်ပါတယ်။
ထားပါတော့ ဆက် စောင့် နေရင်း မြန်မာ ကောင်လေးက မီးခေါင်းလေးကိုင်ပြီး
၀င်လာပါတယ်။ အမ ဈေးက ၃၀ ရင်းဂစ် တဲ့ ။ယူမလားတဲ့ ။
ကျမလဲ စိတ်ပျက်စွာ နဲ့ မယူတော့ဘူးကျေးဇူးပါဘဲ လုပ် ခဲ့ လိုက်ပါတယ်။
ဒါ နဲ့ဘဲ ဆက်လျှောက် သွားပြီး ဆိုင်တွေ လိုက်ကြည့် တစ်ဆိုင်လုံးမှာ
တရုတ် မျက်နှာပုံစံ မျိုးဘဲ ရှိတဲ့ ဆိုင်ကို သွား အင်္ဂလိပ်လို ပစ္စည်းကိုမေး ။
ဈေးကို မေးတော့ ရင်းဂစ် ၁၅ ရင်းဂစ် ဘဲ ပေးလိုက်ရတဲ့
Three Pins ခေါင်း တစ်ခု ၀ယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ မြန်မာ နှစ်ဆန်း တစ်ရက် နေ့ည ဘာဈေးမှ
ထပ် မ၀ယ်တော့ဘဲ ဟိုတယ် ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
နောက် တစ်နေ့ စိတ်မကျေနပ် သေးလို့
power bank အကြောင်း သေသေချာချာ ထပ်သိချင်လို့
Guide ကို မေးပြီး Samsung ပစ္စည်း သီးသန့် ရောင်းတဲ့ ဆိုင် သွားတော့ မှ
Samsung Power Bank Original အစစ်က 9000 mAh တစ်မျိုးထဲ ရှိတယ်။
279 R ရင်းဂစ်။ မလေးရှား နိုင်ငံ တွင်း အတွက်
၆ လ ဘဲ အာမခံတယ် ဆိုတာ လေ့လာ ခဲ့ ရပါတယ်။
Shopping Mall တွေက ကောင်တာ တစ်ချို့ မှာ ရှိတဲ့
/ 13000 mAh က ဈေး ပိုသက်သာ ပြီ့း ၁၃၀- ၁၆၀ ရင်းဂစ် နဲ့ ရောင်းတာပါ။
ဒါကို တစ်ချို့  မသိသူတွေကို ၂၇၉ ရင်းဂစ်ကိုဘဲ လျော့ ရောင်းသလိုလို နဲ့
၂၅၀ ရင်းဂစ် ဆိုပြီး ရောင်းတာပါ။
ပစ္စည်း နှစ်ခုက တူ မလိုလို နဲ့ အတူတူ တွဲ ကြည့်ရင်
ကွဲပြားခြားနားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
Power Bank အများစု အားလုံးနီးပါးကတော့ Made in China တွေဘဲ ဖြစ်ကြပြီး။
China ခြင်း တူတာကို ဈေးပေါရောင်းကွာလာတီ အနိမ့် ပစ္စည်း နဲ့
ပြန် ထပ် တု ထားတာလို့ဘဲ ထင်မိပါတယ်။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး Samsung တံဆိပ် ကပ် ထားတဲ့ ဆိုင် တစ်ခု မှာ
တရုတ် မျက်နှာ နဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကို တွေ့ ပါတယ်။
ကိုယ် မရှင်းဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ ပစ္စည်း ၂ မျိုး အကြောင်းကို
သူတို့က သေသေချာချာ ရှင်းပြပါတယ်။
သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကျတော့ Samsung counter မှာ
Samsung Phone တွေ ရောင်းနေပြီး။
သူတို့ သုံးနေတဲ့ Power Bank က
( Wopow Power Bank ) ဆိုတာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုယ်ကလည်း ဒီတစ်ခါတော့ ပေါ်တင်ဘဲ မေးလိုက်ပါတယ်။
နင်တို့ ဆမ်ဆောင်း ပစ္စည်းတွေ ရောင်းပြီး
ဘာလို့ ဒီ power bank ကို သုံးတာလဲ လို့
ဆိုတော့ အခု wopow power bank က
၁၈ လ အာမခံ ချက် ရှိတယ်။
မကောင်းရင် ပြန်ပြင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
အသစ် တစ်လုံး တစ်ခါထဲ ပြန်လဲ ပေးတာ။
ဘယ်သူမှလဲ ပြန်လာလဲတာ မရှိဘူး။
ဒါကြောင့် ဒါကို သုံးတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကိုယ်လဲ သူတို့ သုံးတဲ့ ၁၈ လ အာမခံ
( Wopow Power Bank 9000 mAh ) ကို
၂၁၉ ရင်းဂစ် နဲ့ ၀ယ်လာခဲ့ လိုက်ပါတယ်။
ကောင်းမကောင်း ဆိုတာတော့ စမ်းသုံး ကြည့် ရ မှာပါဘဲ။
စကားတွေ စပ်မိရင်းက ဆိုင်ပိုင်ရှင် မလေး တရုတ်က
မာတီမီဒီယာ နဲ့ ဘွဲ့ ရတာ။
အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း
သူ့ ဆိုင် နားမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အများကြီးဘဲ။
refugee တွေ များတယ်လို့ လဲ သူက ထပ် ပြောဆိုပါတယ်။
ကျမ တို့ တိုင်းပြည် နိုင်ငံရေးက တစ်ကယ် မကောင်းဘူးလား
ကိုယ်လဲ နည်းနည်းပါးပါး ရှင်းပြ လိုက်ပါတယ်။
နောက် တစ်နေရာ Shopping Mall ထပ် ရောက်လို့
Power Bank တွေ မြင်လို့ ထပ်ကြည့် တော့ မြန်မာ ကောင်လေးတွေ အရောင်းဝန်ထမ်း ဆိုင် ဖြစ်နေတယ်။
အမ မြန်မာလား။ ဘာရှာနေတာလဲ။
တဲ့ ဘာမှ မရှာပါဘူးလို့ ပြောပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။
စိတ်ထဲ မှာလဲ အမျိုးအမည် မသိသော ဝေဒနာ တစ်ခု ဖြစ်ထွန်းမိပါတယ်။
COPIED FROM CM
၂၆ရက် - ဇွန်လ - ၂၀၁၃ ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ )
၁။ ကျမရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို စူးရှအေးစက်နေတဲ့ လေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ထိတွေ့ တိုက်ခတ်သွားလေရဲ့ ။ အဲဒီလေငွေ့ ထဲမှာများ မောင့် ရယ်သံကို သဲ့သဲ့လေး ကြားလိုက်သလားလို့။ မောင်က ပျော်နေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျမကို လှောင်နေတာလား။ ဘာတွေပဲ ဖြစ်နေနေ, မောင့်ရဲ့ ရယ်သံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ လှောင်သံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျမကို ၊ ပြီးတော့ ကျမရဲ့ ရင်ကို နွေးထွေးသွားစေတာတော့ အမှန်ပဲ မောင်ရေ။
ဒါပေမဲ့ ကျမ မရှိတဲ့ နေရာမှာ ရီနေတာက မောင် တစ်ယောက်ထဲမှ ဟုတ်ရဲ့ လား။ မောင့်ဘေးမှာ တခြား အဖေါ်သစ်များ ရှိနေရော့သလားလို့ တွေးမိတဲ့ အခါမှာတော့ ကျမရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကျဉ်လာတယ်ကွယ်။ နာကြည်းမှုတွေနဲ့ အသားကျနေခဲ့လို့ ထုံနေခဲ့တဲ့ နှလုံးသားက မနာတတ်တော့ဘူး ဆိုပေမဲ့ ကျဉ်ပြီး တော့ အောင့်လာတတ်သေးတယ် မောင်ရေ ။ မျက်ရည်ကျပြီး မငိုတတ်တော့ပေမဲ့ မျက်လုံးအိမ်တွေ စူးအောင့်ပြီး ရင်ထဲမှာတော့ ရှိုက်နေမိသေးတယ်။
မင်း…… ဘာတွေပြောနေ၊ ညည်းနေတာလဲလို့ မယုံသလိုတော့ မကြည့်ပါနဲ့ မောင်ရယ်။ မောင်ဟာ ကျမရဲ့ မျက်နှာကို ဘယ်တော့မှ ဖတ်တတ်မှာ မဟုတ်သလို ကျမရဲ့ နှလုံးသားကိုလဲ ဘယ်လိုမှ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားမနာတမ်း ပြောရရင် မောင်က အ,တာ ကိုး။ ကျမကလဲ အရမ်း ဟန်ဆောင်တတ်တာကိုး။
ဘယ်ကိစ္စပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို အကြောင်းအရာပေါ်မှာပဲ မဆို အသွင်မတူသလို အမြင်လဲ မတူပဲ ခံစားတတ်တဲ့ ကျမနဲ့ မောင့်ကို ဘယ်အကြောင်းပြချက်တွေကများ ဆုံဆည်းစေခဲ့တာပါလိမ့်။ ဘာသဘောနဲ့များ နီးစပ်ခွင့်တွေ ပေးခဲ့တာပါလိမ့် ။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆုံစည်းခွင့်တွေ ၊ နီးစပ်ခွင့်တွေဟာ ကျမတို့ နှစ်ယောက်အတွက် မတန်မရာ နာကျင်မှုတွေ၊ ကြေကွဲမှုတွေကိုပဲ ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ အမှန်ပဲနော်။ ကျမတို့ နှစ်ယောက် အကြောင်း ပြန်တွေးကြည့်မိတော့ ပျော်ဖို့တော့ အကောင်းသား ။ ဝေးကွာနေရချိန်မှာ တွေးတာလောက်ကတော့ အပြစ် မရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်မောင်ရယ်…..။
၂။ ၁၉၈၀ ခု…..….။ အဲဒီနေ့က ကျမနဲ့ မောင် ပထမဆုံး စ, တွေ့တဲ့နေ့ကို မှတ်မိနေသေးတယ် ။
ကျမက မောင်တို့ ကျောင်းကို အသစ်ပြောင်းလာတဲ့ ကျောင်းသူ ။ ကျောင်းသူသစ်ဆိုပေမဲ့ အစထဲက လူမကြောက်တတ်တော့ ကျမတက်ရမဲ့ စာသင်ခန်းကို အ၀င်မှာထဲက ကျမရဲ့ မျက်နှာကျောက မာတင်းတင်းရယ်။ ခုနှစ်တန်း ကျောင်းသူ ဆိုတော့ အပျိုပေါက်မလေးပေါ့နော။ အတန်းထဲက ၀ိုင်းပြီး ကြည့်နေကြတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ကျမက ခပ်စူးစူး ပြန်ကြည့်ပြီး ချက်ချင်း အဓိပ္ပါယ် ဖတ်ပစ်လိုက်တာ။ ရန်သူ ဘယ်နှစ်ယောက် ပါနေနိုင်ပြီး မိတ်ဆွေ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိနေနိုင်မလဲ ဆိုတာကို အဖြေ ထုတ်တာလေ။
အဲဒီမှာ မျက်တောင်တိုတိုလေးတွေနဲ့ ရီမောနေတဲ့ မျက်လုံးသုံးစုံကို အရင်ဆုံး တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီ မျက်ဝန်းပိုင်ရှင်တွေက ကျမရဲ့ ချစ်လှစွာသော ငယ်သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဆိုရမှာပေါ့နော်။ အတန်းပိုင် ဆရာမက ကျမအတွက် ထိုင်ဖို့ နေရာရွေးပေးနေတုံးမှာ “ ဆရာမ။ ကျမ ဒီသုံးယောက်နဲ့ အတူတူ ထိုင်လို့ ရမလားရှင့် ” လို့ ကျမက ခပ်သွက်သွက် မေးလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကထဲက ကျမမှာ လိုချင်တာ၊ ဖြစ်ချင်တာကို အတိအကျ ရွေးချယ်တတ်တဲ့ စရိုက်က အစပြုနေခဲ့ပြီလေ။ ဆရာမက သူတို့သုံးယောက်ကို “ သမီးတို့ အဆင်ပြေမလား ” လို့ မေးတော့ သူတို့သုံးယောက်က “ ရပါတယ် ဆရာမ ”လို့ ၀မ်းသာအားရ ပြန်ဖြေကြရင်းက ကျမအတွက် သူငယ်ချင်းတွေ ရသွားပါတယ်။
တစ်ခါ အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျမကို စာသင်ခန်း သန့်ရှင်းရေး တာဝန်အတွက် အသင်းခွဲပေးပါတယ်။ ဗန္ဓုလအသင်းမှာ ကျမကို တာဝန်ချပေးပြီး ကျမရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် အဖြစ်ရယ် ၊ အတန်းခေါင်းဆောင် အဖြစ်ရယ်ပါ တာဝန်ယူထားတဲ့ သူကတော့ ကျမချစ်တဲ့သူ ဖြစ်လာမဲ့ မောင်ပါ ။ မောင့်ကို မြင်,မြင်ချင်း ကျမ အရင်ဆုံး သတိထားမိတာက မောင့် မျက်ဝန်းအစုံပါပဲ ။
မျက်တောင်ရှည်ရှည် ၊ မဲမဲလေးတွေက မျက်ဝန်းကို စီပြီးရံထားတာတွေ ၊ မျက်လုံးပေါ်ကိုအုပ်ပြီး စိုက်ကျနေတာတွေက မဆန်းပေဘူးလား ။ ကြည်လင်နေတဲ့ မောင့် မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ မျက်တောင်တွေရဲ့ အရိပ်တွေ ဖြာကျနေတာကို အံ့သြစရာ တွေ့ ရတာပါပဲ ။ အဲဒီတုန်းက မောင့်မျက်ဝန်းတွေကို ရင်ခုန်တဲ့စိတ် လုံးဝမရှိခဲ့သေးပဲ ရိုးသားစွာ သဘောကျသွားမိတာ အမှန်ပါ။
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ အဲဒီမျက်ဝန်းအစုံရဲ့ အားနည်းချက်ကိုလဲ သတိထားမိပါတယ်။ သူ့ မျက်ဝန်းတွေက တောက်ပမှု အားနည်းတယ်လို့ ။ ဆရာမက သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီ ဆိုပြီး အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်ခိုင်းပါတယ်။
“ ငါက မင်းခန့်ဇော်ပါ........” မောင့်ရဲ့ ပထမဆုံး နှုတ်ထွက်စကားက မာဆတ်ဆတ် လေသံနဲ့ပါလား။
“ အော.....။ ၀မ်းသာပါတယ်။ ငါက ယုမီချိုပါ ..” ဆိုတဲ့ စကားကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ပဲ ပြန်ပြောရင်း ကျမ ချက်ချင်း မျက်နှာလွှဲလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ မျက်ဝန်းရယ်၊ မာဆတ်ဆတ် လေသံရယ်က ကျမကို စိတ်တိုစေပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ကျမရဲ့ ခပ်ရင့်ရင့် လေသံရယ်၊ အမူအယာရယ်ကလည်း သူ့ကို အဆင်မပြေစေခဲ့ဘူးလို့ နောင်တော့ မောင်က ရီဖွဖွနဲ့ ခဏခဏ ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
04/22/14--06:40: လွမ်းလောက်လို့လား .... (၂)
ကျောင်းမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ တစ်ပါတ်မှာတစ်ရက် တာဝန်ယူရမယ် ၊ ကျမပါဝင်တဲ့ အသင်းက အပါတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့မှာ သန့်ရှင်းရေးတာဝန်ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး သောကြာနေ့မှာတော့ တစ်တန်းလုံး ပါဝင်သန့်ရှင်းရမယ် ဆိုတာတွေကို ဆရာမက ဆက်ရှင်းပြပါတယ် ။ ကျမရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်နားမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်တော့ ကျမနဲ့ ဘေးချင်း ကပ်ရက်က ခုံတန်းမှာ ထိုင်နေတာက မောင် ဖြစ်နေပါ့လား ။
အိုး....ပျော်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ ။ အိမ်မှာဆိုရင် ရွှီကနဲတောင် လေချွန်လိုက်မိမှာ ။ ကျမကသိပ်ပြီး မိန်းမ မဆန်ဘူးလေ ။ အဲဒါက ကျမအပေါ် မောင် မကြိုက်ဆုံး အချက်နံပါတ်တစ်ပေါ့ နော။
ဆရာမက ညနေ ကျောင်းဆင်းကာနီးမှာ ကျမကို စာတွေ ၀ိုင်းကူးပေးဖို့ ၊ စာအုပ်တွေ ငှားပေးကြဖို့ အတန်းဖေါ်တွေကို မှာသွားပါတယ်။ ကျမနဲ့အတူတူ ထိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်က နီလာတင်ရယ် ၊ ကေသီဝင်းရယ် ၊ သင်းသင်းမွှေးရယ်ပါ ။ သူတို့ သုံးယောက်လုံးက ပျော်တတ် တဲ့သူတွေ ၊ ဟာသဥာဏ် ရှိသူတွေလေ ။ ပြီးတော့ ဒီသုံးယောက်က မောင့်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်က သူငယ်ချင်းအရင်းတွေလဲ ဖြစ်လို့နေပြန်ပါရော ။
ကဲ ...စာအုပ်တွေ ငှားတဲ့အချိန်မှာ ဇာတ်လမ်းက စ , တာပါပဲ ။
“ အဲဒီတစ်ယောက်ကို နင်တို့သုံးယောက်စလုံးက ဘာလို့ စာအုပ်တွေ အကုန်ငှားနေရတာလဲ ” ဆိုတဲ့ စကားကို ခပ်မာမာလေသံနဲ့ ပိုင်စိုးပိုင်နင်း ပြောလိုက်တဲ့ အသံက မင်းခန့်ဇော်ဆီက ထွက်လာပါတယ် ။
သူ့ရဲ့ လေသံက သူတို့သုံးယောက်အပေါ် အမိန့်သံ ဆန်နေသလို ကျမကို သေးငယ်တဲ့၊ အရေးမပါတဲ့ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ ရှိနေတဲ့ အရာအဖြစ် အသတ်မှတ် ခံလိုက်ရသလိုပါပဲ ။ အဲဒါက ကျမ အမုန်းဆုံး၊ လက်မခံနိုင်ဆုံး အချက်တစ်ခု ဖြစ်နေတော့ ကျမရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးက သွေးတွေဟာ ဒေါသ၊ မာနစိတ်နဲ့ ပွက်ပွက်ဆူလာခဲ့ပါတယ်။
အံမာ….သူကများ……..ငါ့ကို ။ ဆိုတဲ့ ဒေါသစိတ်နဲ့ ဆတ်ကနဲ လှမ်းကြည့်မိတဲ့ ကျမမျက်လုံးတွေက မီးတွေ ၀င်းဝင်းတောက်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ “ ငါလဲ ငါ့စာအုပ်တွေ ငှားပေးအုံးမှာပေါ့ ” ဆိုတဲ့ စကားကို ခပ်ရှက်ရှက်နဲ့ မျက်လုံးလွှဲပြီး လှမ်းပြောလိုက်တဲ့ သူ့ အမူအယာရယ် ၊ ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်တဲ့ အသံဖျော့ဖျော့ရယ်ကြောင့် ကျမမှာ ထွက်မိတဲ့ ဒေါသတွေ ချက်ချင်းပျောက်ပြီး ရီချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာမိပါတယ် ။
“ အော်…ဘာများလဲလို့ မင်းခန့်ဇော်ရယ် ” လို့ ပြောရင်း ကျမကပဲ သူ့ကို အားနာပြုံးနဲ့ နှစ်သိမ့် ပေးလိုက်ရပါတယ်။
မောင့်ရဲ့ ဖြစ်ပုံက… စကထဲက ယဉ်သကို ဆိုသလို…။
“ ငါ့ကို ငှားမယ်ဆိုလဲ နင့် စာအုပ်တွေ မြန်မြန်ပေးထား ၊ ကျောင်းဆင်းရင် မေ့သွားမှာ စိုးလို့.. ” ဆိုပြီး သူ့စာအုပ်တွေကို ကျမကပဲ တကယ်ကို လိုလိုလားလား ယူချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ပြောလိုက်ရတယ်လေ ။ အမှန်က ကျမ ဘယ်သူ့ဆီက ဘာစာအုပ်မှ မငှားချင်သေးပါဘူး ။ စာလုပ်ရမှာ ပျင်းနေသေးတယ် မောင်ရဲ့ ။
“ နင်…..ငါ့ စာအုပ်တွေကို စံနစ်တကျ ကိုင်နော် ၊ ငါက စာရွက်တွေ အနားလိပ်တာ, ခေါက်တာတွေ မကြိုက်ဘူး ယုမီချို ”
“ အံမာ….။ နင့်ကို အားနာလို့သာ စာအုပ်ငှားရတာ ။ ငါက သူများလက်ရေးကို ဖတ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ နင့်လက်ရေးက ငါ ဖတ်လို့ ရတဲ့အဆင့်ရော ရှိရဲ့ လား…။ ပြစမ်း ”
ဆတ်ကနဲ သူ့စာအုပ်ကို လှမ်းဆွဲပြီး ဖွင့်ကြည့်မိတော့ ။
ဘုရားရေ ။ သူ့လက်ရေးတွေက စာလုံးဝိုင်းဝိုင်းမှာ အပင့်,အရစ်တွေကို ထောင့်ကျကျဆွဲပြီး ရေးထားတာများ ။
ပုံနှိပ်စာလုံးတွေကို အရွယ်အစား ချဲ့ ထားသလိုပါပဲလား ။
“ တော်သေးတာပေါ့ ။ ငါ ဖတ်လို့ ရတဲ့ လက်ရေး ဖြစ်နေလို့ ” ဆိုတဲ့ စကားကို ဟန်မပျက် ပြန်ပြောရင်း ကိုယ့်လက်ရေးထက် အဆများစွာ သာလွန်ကောင်းမွန်နေတဲ့ သူ့လက်ရေးကို ကျမ သဘောကျသွားမိပါတယ် ။ ကျမရဲ့ မှတ်ချက်အတွက် အောင့်သက်သက် ခံစားလိုက်ရပုံနဲ့ သူ့မျက်နှာ ရဲသွားတာကို ကြည့်ရင်း အကောင်းကြိုက်၊ အတော်ကြိုက်တဲ့ ကျမအတွက်တော့ နှစ်ခြိုက်စရာ အရုပ်ကောင်းကောင်း တစ်ခုကို စတွေ့ရသလို ခံစားမိပြီး ပျော်လိုက်တာ ။
စ,တွေ့ တဲ့နေ့မှာပဲ မောင်ဟာ ကျမအကြိုက်ဆုံး အချက်တွေရယ်၊ မကြိုက်ဆုံး အချက်တွေရယ်နဲ့ ထူးခြားစွာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့ စည်းထားပြီး ကျမကို ငြင်းဆန်နိုင်စွမ်း လျော့ကျအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ မဟာလူသားတစ်ယောက် အဖြစ် သိရှိနားလည် လိုက်ရပါတယ် ။
အဲဒီအချိန်က စလို့ မောင်ဟာ ကျမရဲ့ ဘ၀ထဲကို တစ်လှမ်းချင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ၀င်ရောက် လာခဲ့တာပဲပေါ့ မောင်ရယ် ။
04/23/14--06:15: ၁၁ မီးကြားက အမှားတွေ
လူတွေရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို Intelligence လို့ခေါ်ပြီး အဲဒီဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုကို IQ (Intelligence Quotient) လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ လူ့စိတ် ခံစားမှုကို Emotion လို့ခေါ်ပြီး စိတ်ခံစားမှု ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို Emotional Intelligence လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ Emotional Intelligence စွမ်းရည် တိုင်းတာ စစ်ဆေးမှုကို EQ (Emotional Quotient) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အတိုကောက် IQ နဲ့ EQ လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
ဘဝမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူအများစုဟာ IQ သာမက EQ ပါမြင့်တယ် လို့ဆိုပါ တယ်။ EQ မြင့်တယ်ဆိုတာက မိမိ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်တာ တစ်နည်း အားဖြင့် ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့စကားကို ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့အချိန်မှသာ ရွေးချယ်ပြောဆိုတတ်တာ၊ ပြောတဲ့အခါမှာ လူအများနားဝင်ခံသာအောင်ပြောဆို တတ်တာမျိုးလို့ ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုတွေနောက်ကိုလိုက်မိတဲ့အခါ လူဟာအမှားနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှု အတိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာ Emotional Intelligence စွမ်းရည်နည်းပါးပါတယ်။အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် တချို့နေရာတွေမှာ ကျွန်တော်ဟာ EQ နိမ့်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားတဲ့ကြားက သတိလစ်ရင် လစ်သလို မကြာခဏ မှားတတ်ပါ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ သာမန်ပုထုဇဉ်တစ်ဦးဖြစ်တာနဲ့အမျှ တခြားလူတွေလိုပဲ မှားတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ရဲကျော်သူရ အပါအဝင် စစ်သားတချို့၊ စစ်သားလူထွက်တချို့ ကိုကြည့်ပြီး စစ်သားအားလုံး ဒီအတိုင်းချည်း ပဲလို့ ကောက်ချက်ချတာဟာလည်း မမှန်ပါဘူး။ ရထားပေါ်ကနေ သိုးမည်း တစ်ကောင် ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရနိုင်တဲ့ ဥပမာလေးကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက မနေ့ကပဲ တိုင်းရင်းသားလူငယ်လေးတစ်ယောက်က ကျွန်တော့် ချက်ဘောက်ထဲဝင်လာပြီး တိုင်းရင်း သားတွေကို ခွဲခြားပြီးမရေး ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလာ ပါတယ်။ကျွန်တော်အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ ဗမာတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ ကိုယ့်အမျိုးကိုယ်ချစ်ပေမဲ့ ကျွန်တော် ဘယ်တိုင်းရင်းသားကိုမှ မမုန်းသလို ချိုးနှိမ် ဆက်ဆံလိုတဲ့စိတ်လည်း အလျဉ်းမရှိပါဘူး။
တချို့ Status တွေမှာ တိုင်းရင်း သားနာမည်တွေထည့်ရေးရတာ ကိုးကားတဲ့ မူလစာအုပ်ပါအရေးအသားအတိုင်း မှတ်မိသရွေ့ ပြန်လည်ရေး သား ဖေါ်ပြ ခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်၌က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အကြောင်းရေးရင် သူတို့ရဲ့ တရားဝင်နာမည်အတိုင်းသာ ရည်ညွှန်း ရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - KIA ကို KIA လို့သာရည်ညွှန်းရေးသားပါတယ်၊ ကချင်လူမျိုးလို့ခြုံပြီးမရေးပါဘူး။ KNU ကိုလည်း KNU လို့သာရေးပါတယ်၊ ကရင်လူမျိုးလို့ ခြုံပြီးမရေးပါဘူး။ဒီလိုပဲ တခြား Status တွေမှာရေးနေကြတာဟာလည်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကို မုန်းတီးလို့ ရေးသားနေကြတာမဟုတ်ဘဲ တပ်မတော်ကို တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဗမာစစ်တပ်လို့အလွယ် ခေါ်သလို ခေါ်လိုက်ကြ တာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်ထဲမှာ လူဦးရေအချိုးများလို့ ဗမာအများဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ ကျန်တဲ့တိုင်းရင်း သားပေါင်းစုံလည်းရှိပါတယ်။ တပ်မတော်ကတော့ရှင်းပါတယ်၊ ဘာလူမျိုးရေးမှ မရှိသလို၊ ဘယ်လိုသွေးကွဲစိတ်မှလည်း မရှိပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်ကို Request လုပ်လာတဲ့ ညီလေးကိုပြောချင်တာက ဗမာတွေဟာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကိုမှ မမုန်းပါ ဘူး။ ဗမာခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဗမာလူကြီးမိဘတွေက လည်း တိုင်းရင်းသားတွေကို မုန်းရမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မသင် ပေးခဲ့ကြပါဘူး။အခုလို မေတ္တာရပ်ခံလာတဲ့ညီလေးဟာလည်း ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ ညီလေး တစ်ယောက်ဖြစ်တာကို သိရလို့ အင်မတန်မှ ဝမ်းမြောက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆိုခဲ့သလို လူဟာမှားတတ်ပါတယ်။ တချို့အမှားက စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားပေးလို့ Emotional Intelligence မထိန်းနိုင်ဘဲ မှားတဲ့အမှားပါ။ တချို့အမှားကတော့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့ နမော်နမဲ့အမှားပါ။ ဘယ်လိုပဲမှားမှား အမှားဆိုတာ မကောင်း ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မှားတယ်ထင်ရင် ထောက်ပြပါ၊ ဝေဖန်ပါ၊ အားလုံးကို လက်ကမ်းကြိုဆိုပါတယ်။ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်……
04/23/14--09:11: နိုင်ငံတော် အရည်အသွေး ၂၀၁၅အလွန်မှာ ပုံဖော်လာနိုင်မလား
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးက တောင်းဆိုလိုက်သော ပြည်သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ နှစ်ရပ် ရှိတယ်လို့ သဘောရပါတယ်။
ပထမ လိုလားချက်က သိပြီးဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမျှော်လင့်ချက်က မိမိတို့ရဲ့ ဆိုးဝါးညံ့ဖျင်းနေတဲ့ လူမူ့စီးပွားတိုးတက် မြင့်မားရေး ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတို့ရဲ့ ဒုတိယလိုလားချက် ပြည့်ဖို့ဆိုရင် အခြေခံအကျဆုံး လိုအပ်ချက်က မှီတငိးနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံတော် အရည်အသွေးကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်းကို ဘာအရာတွေနဲ့ ပေတံတိုင်းသလဲဆိုရင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ဟာ အကျင့်ပျက်ခြစားမူ့ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ အဂတိလှိုက်စားမူ့ ဘယ်အတိုင်းအတာလွှမ်းမိုးနေသလဲ
အရှင်မွေး သူကောင်းပြုစနစ် လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ် စနစ် ဘယ်လောက် အမြစ်တွယ်နေသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ တိုင်းတာကြပါတယ်။
အဲဒီပေတံတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို တိုင်းတာကြည့်လိုက်ရင် နိုင်ငံတော်အရည်အသွေးကို လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက ထုတ်ပြန်တဲ့ ညွှန်ကိန်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း မြန်မာတို့ရဲ့ နိုင်ငံတော် အရည်အသွေး ဆိုးဝါးနေပုံကို အလွယ်တကူပဲ အကဲဖြတ်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနဲ့နိုင်ငံတော် အရည်အသွေး စာအုပ်ရေးသားပြုစုသူ ပါမောက္ခဖရန်စစ်ဖူကူယားမား ကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းရခြင်းမှာ လစ်ဟာချက် ၃ ရပ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂရိ အီတလီ ဂျာမဏီ စတဲ့ လေးနိုင်ငံကို လေ့လာပြီး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ လစ်ဟာချက်က စံတော်ဝင်စက်မူ့နိုင်ငံ ထူထောင်ရေး အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိနဲ့အီတလီနိုင်ငံတို့ဟာ ဒေသတွင်းစက်မူ့တော်လှန်ရေး မွေးရပ်မြေ ဖြစ်မလာတဲ့ အတွက် အဆိုပါတော်လှန်ရေးက မွေးထုတ်ပေးတဲ့ လူလတ်တန်းစားပေါ်ထွက် လာခြင်း ကင်းမဲ့သွားပါတယ်။စက်မူ့ တော်လှန်ရေးက မွေးထုတ်ပေးတဲ့ လူလတ်တန်းစားဟာ နိုင်ငံတော် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အဓိကတွန်းအားပေးတဲ့ လူတန်းစား တစ်ရပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံတော် အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ ဗြိတိသျှ နဲ့ အမေရိကမှာ လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင့် မြို့ပြဖြစ်ထွန်းလာမူ့ ဒီမိုကရက်တစ်မဲပေးခွင့်များ ကျယ်ပြန့်လာမူ့ စတာတွေကလည်း ဂရိနဲ့အီတလီတို့ရဲ့ နိုင်ငံတော် အရည်အသွေးကို ညံ့ဖျင်းစေပါတယ်။
ဆက်စပ်အကြောင်းအရင်းကတော့ စီးပွားရေးသစ်နဲ့ တည်မှီပြီး လူလတ်တန်းစား ပေါ်ထွန်းလာခြင်း မရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံသားတိုရဲ့ အလုပ်အကိုင်ဟာ အစိုးရအလုပ်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ရွေးစရာရှိလာပါတယ်။တဖန် နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကလည်း မဲနိုင်ရေးအတွက် မိမိပါတီရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရရင် အလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး မက်လုံးနဲ့ မဲဆွယ်လာကြပါတယ်။နိုင်ငံရေ့း အဆက်အသွယ်ရှိမှပဲ အလုပ်ရရှိပြီး ဘဝတက်လမ်းကို တွေ့ရှိနိုင်ရာကနေ စပြီး လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ်စနစ် ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
အရည်အချင်းထက် အဆက်အသွယ်က ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်က နိုင်ငံတော် အရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေတဲ့ အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယလစ်ဟာချက်က ယဉ်ကျေးမူ့ဆိုင်ရာ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးလစ်ဟာချက်ကတော့ ခေါင်းဆောင်မူ့ဆိုင်ရာ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီမှာ အမေရိကရဲ့ ရုစဗဲလ် ဝီလ်ဆင်လို ခေါင်းကိုင်ဖခင်မျိုး မရှိခဲ့ပဲ ဘလူစကိုနီလိုခေါင်းဆောင်မျိုး ရရှိခဲ့တာဟာလည်း နိုင်ငံတော်အရည်အသွေး ကျဆင်းရခြင်း အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေရဲ့ ညွှန်ကိန်းတွေအရ အောက်ဆုံးက စရေတွက်ရင် ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်အရည်အသွေးဟာ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ချီနေပြီဆိုတာ လေ့လာ ကြည့်ရင် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ်အနော်ရထာကနေ ကုန်းဘောင်ခေတ် နောက်ဆုံးမင်းဆက် သီပေါဘုရင်အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်စိုးခဲတဲ့ စနစ်ဟာသက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရင်တစ်ပါးကို နန်းချဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ပုန်ကန်အနိုင်ရသူတွေဟာ စနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ ဘုရင်စနစ်နဲ့ပဲ ထီးနန်းအုပ်ချုပ် မင်းပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင်စနစ်အရ နိုင်ငံတော်ယန္တားရားတွေကို မောင်းနှင်သူတွေကလည်း အရည်အချင်းရှိမရှိဆိုတာထက် ဘုရင်ယုံကြည်ရသူ အပတ်အသက် အဆက်အနွယ်ရှိသူတွေပဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို ဆရာမ မကြန်ရေးတဲ့ ကိုလိုနီခေတ်ဦး ကျေးလက်အုပ်ချုပ်ရေး စာအုပ်မှာ အကျယ်တဝင့်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မိုးကုတ်စီရင်စုမှာ ကျေးရွာအမူ့ထမ်းတွေကို မြို့သူကြီး သူကြီးနဲ့ ဆယ်အိမ်ခေါင်းလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြ ပါတယ်။သူကြီးတို့တွင် ဘုရင်ခန့် သူကြီးနှင့် မြို့သူကြီးခန့် ဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိတယ်လို့ ရေးသားဖော်ပြ ထားပါတယ်။ရွှေဘိုနယ်မှာလည်း သူကြီးတို့ကို ရိုးရာအလိုက် ဘုရင်ကခန့်ထား၍ ရွာအုပ်ကို မြင်းဝန် သို့မဟုတ် မြင်းစာရေးက ခန့်ထားတယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို ထောက်ရူခြင်းအားဖြင့် မြန်မာ့ဘုရင်စနစ်မှာ အရည်အချင်းထက် အဆက်အသွယ်က အထူးအရေးပါပုံကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် စီရင်စုတစ်နယ် နဲ့တစ်နယ် အမူ့ထမ်းအခေါ်အဝေါ်က တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း အကျိုးခံစားခွင့်က တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဟာရူပ်ထွေး လှပါတယ်။
ဘုရင်စနစ်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းနေရခြင်းကို မြှင့်တင်ဖို့မြန်မာတို့ အခွင့်အရေး ရရှိခဲ့တာက ဗြိတိသျှတို့အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးပညာကို စနစ်တကျ သင်ယူတတ်မြောက်ထားတဲ့ ဗျူရိုကရက်တွေနဲ့ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးယန္တားရားကို မောင်းနှင်စေ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တနည်း အရည်အချင်းအလိုက် နေရာပေးအုပ်ချုပ်စေတဲ့စနစ်ကို အသက်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်အဖြစ် အစိုးရအသုံးစရိတ် ချွေတာလွန်းတာရယ် အုပ်စိုးသူတို့ရဲ့ စေတနာ ချို့တဲ့ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုက်သင့်သလောက် အောင်မြင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ခံ မြန်မာတို့ရဲ့ကျွန်ဘဝကို ခါးသက်ခြင်းကလည်း အကြောင်းတရားတစ်ရပ် အဖြစ် ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတော်အရည်အသွေးကို ထိထိရောက်ရောက်မြှင့်တင်နိုင့်မယ့် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်ဆုံးရူံးခဲ့ ရပါတယ်။
၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းကာလ များမှာလည်း မြန်မာဟာ ညီနောင်ချင်း ခင်းရတဲ့ပြည်တွင်းစစ် အရွယ်မတိုင်ခင် သားလျှောခဲ့ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ် စတာတွေနဲ့ လုံးခြာလိုက်ပြီး နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို အာရုံစိုက်ကြိုးစား နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၆၂ခုနှစ်မှာ ဦးနေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီ အာဏာကို ထိန်းသိမ်းရ အပြီးမှာတော့ နိုင်ငံတော် အရည်အသွေး မြင့်မားရေးကို စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ဗျူရိုကရေစီစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းကာကောင်စီဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးကို အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ ကောင်စီစနစ်မှာပဲ အရည်အချင်းထက် အဆက်အသွယ်ရှိသူတွေ နေရာယူနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်လည်း ဗုန်းဗုန်းလဲကျ သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းကာလ ဦးနေဝင်းအလွန် တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက်မှာ လည်း နိုင်ငံရေးပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတွေနဲ့ နိုင်ငံတော် အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး အပိုင်းဟာလည်း စုန်းစုန်းမြှပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အထက်ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာတွေက မြန်မာတို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်အရည်အသွေးပိုင်ဆိုင်ရာ သမိုင်းတင်ပြချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းကို အပြစ်ဖို့ချဉ်းကပ်လို့ အသုံးဝင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် အဖြေရှာဖို့အတွက်ပဲ ချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်။
ဖူကူယားမားရဲ့ လေးနိုင်ငံသုံးသပ်ချက်မှာတော့ ဗြိတိသျှနဲ့ အမေရိကတို့ နိုင်ငံတော် အရည်အသွေးမြင့်မားလာပုံကို အောက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဗြိတိသျှတို့ရဲ့ အရည်အချင်းအပေါ် အခြေခံတဲ့ အလုပ်ခန့်ထားမူ့နှင့် ရာထူးတိုးမြှင့်မူ့ကိစ္စများကို လူလတ်တန်းစားညွှန့်ပေါင်းတို့ အားနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။၁၈၅၄မှာ northcote-trevelyan အစီရင်ခံစာအတိုင်း စတင်အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ပြီး ၁၆နှစ်အကြာမှာ အောင်မြင်စွာ ပြီးပြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကတို့ရဲ့ အရည်အချင်းအခြေခံသော စနစ်ကို ဖော်ဆောင်ပုံက ဗြိတိသျှ တူမယောင်နဲ့ အနည်းငယ် ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ တွန်းအားဟာ ဗြိတိသျှမှာ လူလတ်တန်းစားညွှန့်ပေါင်းက ဆင်းသက်လာပေမယ့် အမေရိကမှာတော့ အဆိုပါအင်အားအပြင် ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ရုစဗဲလ် ဝီလ်ဆင် တို့ရဲ့ ကူညီမူ့တွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။၁၈၈၃ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ Pendleton Actကို ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာမှ အပြီးအပြတ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အရည်အသွေး မြှင့်တင်ဖို့အတွက် လစ်ဟာချက် ၃ မျိုးစလုံး ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ မြန်မာ လို နိုင်ငံလိုအတွက် ဖောက်ထွက်ဖို့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး အကြောင်းအရာက နံပါတ်သုံး ခေါင်းဆောင်မူ့ အချက် ဖြစ်လိမ့်မယ်။အမြော်အမြင်ရှိတဲ့မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်တွေကပဲ ဦးဆောင်ပြီး စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမူ့က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လူလတ်တန်းစားအဖွဲ့ တိုနဲ့အတူ နိုင်ငံတော်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ကြဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအပြီး တက်လာတဲ့ အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေး အကူးအပြောင်း စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲ အတွန်းအတိုက်တွေကို ထိန်းညှိနေရခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော်အားကောင်းရေးကို အားစိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီအတွက် ၂၀၁၅အလွန်မှာ နိုင်ငံတော် အာဏာကို ရယူလာမယ့် မူပြောင်း လူပြောင်းအစိုးရသစ် အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အရည်အသွေးကို အားစိုက်မြှင့်တင်ပြီး ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံက တောင်းဆိုထားခဲ့တဲ့ ဒုတိယလိုအင်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ကိုးကား မကြန် ကိုလိုနီခေတ်ဦး မြန်မာ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
ဖရန်စစ်ဖူကူးယားမား ရေး ဝင်းနောင်ဘာသာပြန်
ဘာလချောင်ကြော်က စတယ်ပဲ ဆိုပါတော့....
ဒီနေ့ ကျောင်းကပြန်ရောက်တာစောတော့ ညနေစာဟင်းချက်ရင်း ...
တလက်စထဲ နောက်ရက်တွေလည်းစားရအောင် ဘာလချောင်ကြော်တွေပါ ကြော်ထားလိုက်တယ်...
ဘာလချောင်ကြော်တွေ ကြော်ရင်း... ကျနော့်အတွေးတွေက ဗိုလ်လောင်းဘဝကို ပြန်ရောက်သွားတယ်....
စစ်ကိုင်းနဲ့ ပြင်ဦးလွင်ဆိုတာက သိပ်မဝေးတော့ ဗိုလ်လောင်းဘဝ (၅)နှစ်လုံးမှာ နှစ်လကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ မေမေက ကျနော့်ဆီ ဧည့်တွေ့လာဖြစ်ပါတယ်....
"မလာပါနဲ့မေမေရာ သားလည်းအစစအရာရာအဆင်ပြေနေတာပဲ"လို့ပြောထဲကြားက မေမေကတော့ နေ့ချင်းပြန်ဧည့်တွေ့ပုံမှန်လာရင်း.. "သားစားဖို့မေမေကိုယ်တိုင် ကြော်ထားတာ"ဆိုပြီး သူလက်ရာ ဘာလချောင်ကြော်တွေပါ သယ်လာပေးတဲ့ သားတစ်ယောက်အပေါ်ထားတဲ့ မေမေ့မေတ္တာနဲ့ သံယောဇဉ်ကို သတိရမိပါတယ်... အဲ့ဒီတုန်းက မေမေ့လက်ရာနဲ့ အခုကျနော့်ဘာလချောင်ကြော်လက်ရာ ကတော့ ဆီ နဲ့ ရေ ပါပဲ... ကိုယ်တိုင်ဟင်းတွေချက်မိတဲ့အခါ မွေးကတည်းကချက်ကျွေးလာတဲ့မေမေ့ကိုလည်း လက်တွေ့ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်....
ဒါနဲ့ ..ဆက်စပ်ပြီး မှတ်မိပါသေးတယ်.... စတုတ္ထနှစ်ဗိုလ်လောင်းဘဝတုန်းကပေါ့...
ဧည့်တွေ့လာတဲ့ မေမေ့ကို ကျနော် outpass ပြန်ဝင်ခါနီးမှာ ကားဂိတ်ထိပြန်လိုက်ပို့ရင်း
"မေမေ... သားမေ့တော့မလို့ဗျာ.... ဒါက ဒီနှစ်ထွက်တဲ့ သားတို့ ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းပဲ... အဲဒီထဲမှာ ကျော်စည်သူ(ရွာသစ်ကြီး) ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်နဲ့ သားရေးထားတဲ့ "တာဝန် နဲ့ ဝတ္တရား"ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ပါတယ်... အမေတစ်ယောက်နဲ့ သားတစ်ယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ ဝတ္တရားဆိုတာနဲ့ သားဖြစ်သူက တပ်မတော်သားဖြစ်နေတော့ တပ်မတော်သားဘဝမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ တာဝန် ဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြ ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးပါ ... မေမေ ဖတ်ကြည့်နော်... "ဆိုပြီး မေမေ့ကို မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်လေး ပေးလိုက်တော့...
"အင်းပါသား... မင်း ဖေဖေလည်း ဝန်ထမ်း၊ မေမေလည်းဝန်ထမ်းတွေမို့ မင်းရေးထားမယ့် တာဝန်တွေ ဝတ္တရားတွေအကြောင်းကို မေမေတို့က နားလည်ပြီးသားပါ... အဲဒါတွေကို မေမေတို့နားလည်ပေးနိုင်လို့လဲ သားကို ဗိုလ်လောင်းတက်ခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့ .. ဘာမှနောက်ဆံမတင်းနဲ့ ဆက်ကြိုးစားသား"ဆိုပြီး အားပေးစကားပြန်ပြောသွားတဲ့ မေမေ့ကို ပြောစရာစကားရှာမရအောင် ရင်ထဲက ကျေးဇူးတင်ရင်း ဝမ်းသာဝမ်းနည်း ခံစားခဲ့မိပါသေးတယ်....
ကျနော့်ဆီကို မေမေဧည့်တွေ့လာတိုင်း ဖေဖေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့တာဝန်နဲ့မို့ကျနော့်အတွက် အားတက်စေမယ့် စာရှည်တစ်စောင်အဖြစ်နဲ့ပဲ ပါလာစမြဲပါ.... တခါတရံမှာ စာလုံးပေါင်းသက်ပုံမမှန်တဲ့ ပဲပင်ပေါက်လက်ရေးလေးနဲ့ မြေးအတွက်ရေးထားတဲ့ အဘွားရဲ့ စာတစ်စောင် နဲ့အတူ ဝိုင်းစက်နေတဲ့ လက်ရေးနဲ့ ညီမလေးရဲ့ စာတစ်စောင်ကလည်း ပါလာတတ်ပါတယ်....
ဗိုလ်လောင်းစတက်ကတည်းက အခုချိန်ထိ ကျနော်ဟာ ... မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဓါတ်ပုံအဖြစ်နဲ့ပဲ အိမ်မှာအမြဲရှိနေခဲ့တာပါ...
တာဝန်တွေကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နေပေမယ့် သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝတ္တရားတွေ ကျေပွန်အောင် ခုထိတော့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့သေးဘူး....
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ စစ်မှုထမ်းတွေမှမဟုတ်ပါဘူး တခြား နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဘဝတွေဆိုတာလည်း ဒီလိုပါပဲ...
ထားပါတော့... ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ... ကျနော်ဒီနေ့ ဘာလချောင်ကြော်ရင်းက အိမ်ကို သတိရသွားလို့ပါ ...
ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲပြောနေပါစေ.... တကယ်တမ်း ကျနော်တို့တွေ ပိုင်တာကလည်း ဒီလိုအရာရာကို "သတိရတမ်းတနေခြင်း"တွေပဲဆိုတာ သက်ဆိုင်သူတွေကလွဲလို့ ဘယ်သူနားလည်မှာလဲဗျာ ....
— feeling missing my family so much in Moscow, Russia.
04/25/14--01:09: ဒီလိုလူငယ်လေးတွေ အများကြီးလိုပါတယ်
အသက် ၂၀ ၀န်းကျင် အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်။ ပုံစံက ခပ်အေးအေး။ ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဘေးခွဲ ခွဲထားတယ်။ ကားပေါ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲ ဂျာနယ်ဖတ်နေတယ်။ ခရီးသွားမယ့်သူတွေထဲမှာ အုပ်စု တစ်စုပါတယ်။ သူတို.အုပ်စု ကားပေါ်တက်လာကတည်းက ကားပေါ်မှာ သူတို.ပဲရှိတဲ့အထာနဲ. အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ပြောနေကြတယ်။ တစ်ခြားခရီးသည်တွေကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်လို.တောင်မထင်တဲ့ပုံ။
တစ်ခြားခရီးသည်တွေရဲ့မျက်နှာတွေမှာက လူရမ်းကားအုပ်စုကို ကြည့်မရလို. တင်းနေတဲ့ပုံစံပေါက်နေပေမယ့်ဒီကောင်လေးမျက်နှာကတော့ ပုံမှန်ပဲ။ အားလုံးကို ဥပက္ခာပြုထားတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။ ရုတ်တရက် ဂျာနယ်ဖတ်နေရင်းနဲ. သူ.နှာခေါင်းထဲမှာ ရာဘာနံ.တစ်ခုရလိုက်တယ်။ ဖိနပ်ကလာတဲ့ ရာဘာနံ.။
မသင်္ကာလို.နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ကအုပ်စုထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ဖိနပ်က
သူ.ခေါင်းကိုလာထိတော့မယ်။ သူ.ခုံပေါ်ကို နောက်ကနေ ခြေထောက်လှမ်းတင်ထားတာ။
ကောင်လေးက ရုတ်တရက် နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ "မင်းကဘာကြည့်တာလည်း"
တဲ့။ မကျေနပ်ဘူးလား ဆိုတဲ့သဘော။ ဘေးကခရီးသည်တွေ ကောင်လေးအတွက် စိုးရိမ်သွားကြတယ်။ ကောင်လေးက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ပြုံးပြပြီး "ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး.. အစ်ကိုကြီးတို.ပြောနေတာတွေကို စိတ်ဝင်စားလို. နောက်လှည့်ပြီး နားထောင်မလို.ပါ"
လို.ပြောလိုက်တော့ လူရမ်းကားအုပ်စု သဘောကျသွားတယ်။ လူမိုက်တွေဆိုတာ အမြှောက်ကြိုက်တယ်မလား။
သူတို.စကားဝိုင်းထဲကို ကောင်လေးဝင်သွားတယ်။ ကောင်လေးပုံစံက သူတို.ပြောနေတာတွေကို လေးစားအားကျနေတဲ့ပုံ။ သူတို.စကားပြောတာ နားထောင်နေရင်းနဲ. တစ်ခါတစ်ခါ "ဟုတ်လား .. မိုက်တယ်ဗျာ.. ခင်ဗျားတို.ကို အားကျတယ်"ဆိုတဲ့ အမြှောက်စကားလုံးလေးတွေ ထည့်ထည့်ပေးတယ်။ ဟိုအဖွဲ.ကလည်း သူတို.တပည့်တစ်ယောက်တိုးလာပြီဆိုပြီး ငါကွဆရာကြီးဆိုတဲ့ ပုံစံတွေပေါက်လာပြီး ကောင်လေးကိုလည်း ခင်သွားတယ်။ လူမိုက်တွေဆိုတာ တပည့်လိုချင်ကြတယ်လေ။ရုတ်တရက် သူတို.အုပ်စုထဲကတစ်ယောက်က "ဆေးလိပ်သောက်ကြမယ်ကွာ"ဆိုပြီး စကားစတယ်။ Air-con ကားပေါ်မှာ ဆေးလိုက်သောက်ဖို.ပြောပြီဆိုကတည်းက အခြေအနေက မကောင်းတော့ပါဘူး။
ဆရာဝင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကိုတို.လို မီးကျောင်းမင်းတွေကို ကျွန်တော်လို ပုဇွန်ဆိတ်လေးက ရေခင်းလည်းမပြရဲပါဘူး။ ခုချိန် ကားပေါ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်လို. အဆင်မပြေလောက်ဘူးအကိုတို.ရ။ဘာလို.လည်းဆိုတော့ ကားပေါ်မှာ အကိုတို. ... ကျွန်တော်တို.ရဲ့ မိဘအရွယ်လောက်ရှိတဲ့လူကြီးသူမတွေ ပါလာတယ်။ သူတို.က ဆေးလိပ်နံ.ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီလိုလုပ်။ ခု.. ကျွန်တော်တို. စကားဝိုင်းကို ရပ်လိုက်မယ်။ နားကြမယ်။ မြို.ပေါ်ရောက်မှ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်း အေးအေးဆေးဆေးထပ်ပြောကြတာပေါ့ဗျာ... ဘယ်လိုလည်း"။
လူရမ်းကားအုပ်စု ကာင်လေးရဲ့အကွက်ထဲကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်သွားပါပြီ။ ကောင်လေးရဲ့စကားကို ကန်.ကွက်မဲမရှိ သဘောတူကြတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ကားပေါ်ကခရီးသည်တွေကို အေးအေးဆေးဆေး နားစေချင်တဲ့အတွက် ထက်မြက်တဲ့ ကောင်လေးက အရဲစွန်.လူရမ်းကားအုပ်စုထဲဝင်ရောပြီး ပြဿနာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြေရှင်းသွားတာပါ။ ပထမရင်းနှီးမှုယူတယ်။ ဒုတိယ ကိုယ်လိုချင်သလို ပုံသွင်းလိုက်တယ်။ ကဲ.. အသက်၂၀ လူငယ်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ.ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းသွားပုံက ဘယ်လောက်အတုယူဖို. ကောင်းလည်းဗျာ။ ရန်ကုန်-ပွင့်ဖြူဆွဲတဲ့ "ရွှေပွင့်ဖြူ"အဝေးပြေးကားပေါ်မှာ ကြုံလိုက်ရတဲ့ တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ။